Jizọs laghachiri tupu oké mkpagbu | Apg29
Jizọs laghachiri tupu oké mkpagbu
Na owuwe, Jesus edide chọọchị ya mgbe ọ ga-abịarute na njedebe nke mkpagbu, ọ na-abịa na ya n'ọgbakọ.
Dị nnọọ ka chọọchị ahụ a na nzuzo na ekpughere site Paul, otú a kwa bụ owuwe, a nzuzo a na-ekpughere anyị. Okwu Grik maka nzuzo bụ "Mysterion" ebe huvudbetydningen bụ "ihe na-bụ kpam kpam ọhụrụ na ọ bụghị n'ihu."
A na-azara ọnụ maka na Nga trib
E n ajụjụ ọtụtụ ndị na-ajụ onwe ha na ikwu na nloghachi nke Jizọs bụ mgbe owuwe nke ndị kwere ekwe ga-eme? Anyị na-ekwu banyere atọ dị iche iche fixes nke: tupu trib ozizi, n'etiti-trib ozizi na post-trib ozizi. Nke a ga-abụ ihe nchebe maka tupu trib nkwenkwe. Nke ahụ bụ, na owuwe nke kwere ekwe emee tupu mkpagbu mmalite.
Ma ihe ndị na-abịanụ nke Jehova e nwere ihe atọ anyị ga-ikewa. Ọ bụ nzube Chineke maka ụka, Israel na ndị mba ọzọ. The njehie anyị na-emekarị ka bụ na anyị na mix nkwa Chineke na atụmatụ maka Israel, maka ọgbakọ ahụ. Mgbe ọgbakọ na-ewe ebe Israel na ọzọ ọ ga-abụ na-ezighị ezi. Anyị ga ịmata ihe dị iche mgbe Chineke na-ekwu Israel na mgbe Chineke na-ekwu na ọgbakọ.
P na iwu oge ndị Israel, ndị pụrụ iche na-ebu nke atụmatụ nzọpụta Chineke. GT isi isiokwu bụ Kraịst, ya ọbịbịa ahụ na alaeze ya - na ọmarịcha, kwere nkwa Alaeze, ebe Israel ga-enwe n'etiti ndị mmadụ, na ebe na ala Izrel na Jerusalem ga-enwe n'etiti nke Ụwa ala, ndọrọ ndọrọ ọchịchị na ime mmụọ center.
Jehova iwu ga-aga site na Zayọn, na okwu ya site na Jerusalem, na mba ga-enuba ya. Ezi omume, udo, na nzọpụta a ga-emeri n'ụwa a, a na alaeze nke udo, nke bụkwa Millennium.
Ndị ọgọ mmụọ na Assembly
A TT mba ga-azọpụta, dị ka a N'ihi ya nke Alaeze Mesaya ahụ efe bụ ya mere ọ bụla na nzuzo nke gt. Ma Jehova kwadebeere a pụrụ iche management nke mba nile, site n'izite Mmụọ Nsọ ka ụwa, iji họrọ a eluigwe ndị Chineke gospel nke amara nke bụ na chọọchị ahụ, ọ bụ na nzuzo mgbe ahụ. Ya mere, ọ bụ na-abụghị n'ọgbakọ kwuru na Old Testament, na kwa oké ozizi nke Jesus.
Nke a dị ịtụnanya na nzuzo na anyị mba ọzọ aghọwo ndị nketa ibe nke nkwa Chineke, e mbụ na-agafe Pọl onyeozi, onye ya onwe ya nwetara ya na a mkpughe nke Onyenwe anyị. (Efe 3: 3-6, Col. 1: 25-27). Mmụọ Nsọ na Church atọsa a aku na uba. Na Mmụọ Nsọ nwere na-adịgide adịgide bolig nke kwesịrị ntụkwasị obi, ọgbakọ ahụ n'obi, na bụ ihe ibé anyị nketa uppryckelsens esote ụbọchị.
The Assembly oge anyị bụ ụlọ nsọ nke Mọ Nsọ, naanị temple na Chineke maara n'ụwa taa. Na Mmụọ Nsọ emewo ya n'ebe obibi n'ụwa, bụ n'ezie njedebe, nke bụ iji gbochie àmà na-egosi pụrụ iguzosi ike.
Jesus Christ Mkpughe - Ọ anya ga-eme ndụ
Up 1:19 - Dee okwu ala ihe ị hụrụ na ihe bụ na ihe ga-adị ndụ.
O Rdet "ndụ" bụ okwu Grik bụ meta tauta, nke pụtara "mgbe ihe ndị a" .
Nke a bụ isi ihe amaokwu nke dum nkewa na Mkpughe e dere. Mgbe ahụ John e kwere ka le eluigwe ọhụụ nke Jizọs, ọ na-amụta na ya ga-dee:
1. Na ọ hụrụ. 2. Gịnị bụ 3. Gịnị ga-abụ ndụ. Ndị ọzọ okwu otu atọ Amalite Ijekọ nkewa nke Mkpughe.
1. Gịnị ọ hụrụ
Na isi 1: 12-16 na-ahụ Jọn hụrụ ebube Jesus guzoro ọtọ n'etiti nke asaa idọba-oriọna nke ọla-edo (7 parish), na kpakpando asaa n'aka-ya (7 parish mmụọ ozi). Ọ na-ahụ ebube Jizọs, onye bụkwa bilitere Jehova mmeri nke Calvary. Ọ na-ahụ ya dị ka ọ dị ebube Nwa nke mmadụ, dị ka nwa atụrụ, ọdụm nke ebo Juda, ndi oké ọkàikpe ahụ, na Eze nke ndị eze na Onyenwenụ nke ndị nwenụ.
2. Gịnị bụ
D t bụ ihe nnyocha nke Assembly urskillnings oge, dabeere na amụma na akụkọ ihe mere eme usoro iheomume, ndị nile nọ n'ọgbakọ mụrụ Jizọs laghachi. 7 akwụkwọ ozi na-anọchite anya ọgbakọ na mmụọ ya evolushọn site afọ na-esote owuwe.
The akwụkwọ ozi mbụ zigara Ephesus ọgbakọ na-anọchi anya ọgbakọ oge mbụ, ya bụ na ndịozi afọ. The asaa na ikpeazụ akwụkwọ ozi zigara ndị Leodisia ọgbakọ. Ọchịchịrị ime mmụọ na depụtara akwụkwọ ozi bụ nkọwa na nnọọ na oge ikpeazụ tupu Jizọs alaghachi. Na Leodisia ọgbakọ ọgwụgwụ oge chọọchị.
3. Na ihe shei-enwe ndụ
O Rdet "ndụ" bụ okwu Grik bụ meta tauta, nke pụtara "mgbe ihe ndị a" . Ntụgharị sequentially mgbe ọgbọ ụka, nke na-dị site 7 akwụkwọ ozi.
Rev 4: 1 - ọzọkwa (ie, mgbe Assembly oge n'ụwa bụ ihe karịrị, na ọ na-jupụtara ike), m hụrụ, ma, le, na-anwụ n'eluigwe, na olu m nụrụ okwu m, dị ka a opi , kwuru, sị: " abịa n'ebe , m ga-egosi gị ihe ga-adị ndụ." (ya bụ, mgbe ọgbọ ụka) mGBE m wee na Mmụọ Nsọ, ma, le, a ocheeze guzo heaven, na otu ọdụ n'ocheeze.
Ebe a bụ Assembly owuwe si 1 Ndị Tesalonaịka 4:16, dị ka mkpughe John natara. A siri ike olu, na opi nke Chineke na owuwe. A mara ukem! John ego n'anya na mmụọ ahụ zutere Kraist ụka na-anọchi anya ndị okenye 24 gburugburu ocheeze.
Anyị na-enweta a eluigwe "screanshot" n'Isi nke 4 na nke 5, nke bụ mgbe owuwe, ma tupu mkpagbu n'ụwa. Site Chapter 6 anyị na-azụ na Earth, na John na-ahụ nnụnụ anya anya mkpagbu egwuri si na Earth n'Isi 6-19.
The okenye 24 gburugburu ocheeze
T reviously ẹkedọhọ m na ndị okenye 24 nke ụka na-anọchi anya nke elu-igwe site na owuwe tupu mkpagbu. Anyị nwere ike na-amalite iṅomi otu ozi bụ banyere ndị okenye 24 na nkwa na Assembly:
The okenye 24
Kwere nkwa na Saints
Nọkwasị n'ocheeze (Mkpu 4: 4.11: 6
Nwere na-acha ọcha uwe mwụda (Mkpu 4: 4)
Crown ya n'isi (Mkpu 4: 4,10)
Bụ eze (Mkpughe 5:10
Nchu aja (nkpu 5:10)
Thrones (Matthew 19:28, Mkpughe 3:21
White uwe (Mkpughe 3: 4-5)
Crown (1 ehi 9:25, Lane 4: 1.2)
Ga-eze (Mkpu 1: 6, 2:26, ​​20: 6)
Ga-nchu-àjà (Mkpu 20: 6)
Na Mkpughe 5: 9, ka na-abụ abụ ndị okenye 24 a ọhụrụ song na Kraist na ihe àjà nwa-aturu:
amaokwu 9 Ha bụrụ abụ abụ ọhụrụ: "I kwesịrị ekwesị ịnara akwụkwọ mpịakọta na-emeghe akara ya, n'ihi na e gburu egbu, na ọbara gị na ị zụrụ maka Chineke ndị mmadụ si n'ebo niile na asụsụ na ndị na mba. V.10 I mere ha bụrụ otu alaeze na ndị nchụàjà Chineke anyị, ha gabu kwa eze n'elu ụwa. "
S ọtụtụ ugboro tupu, e nwere kemgbe na njehie na translation si Grik mbụ akụkụ. Tinyere ihe ndị ọzọ, na-Mb dabeere na ọtụtụ ndị odide Grik sụgharịta dị ka nke a kama:
amaokwu 9 Ha bụrụ abụ abụ ọhụrụ: "I kwesịrị ekwesị ịnara akwụkwọ mpịakọta na-emeghe akara ya, n'ihi na e gburu egbu, na ọbara gị na ị zụrụ maka anyị n'ihi na Chineke si n'ebo niile na asụsụ na ndị na mba. V10 I mere ka anyị na eze na ndị nchụàjà Chineke anyị, anyị ga-eze n'elu ụwa. "
D e okenye 24 mata onwe ha na ndị kwere ekwe, na bụ ya mere niile gbapụtara ndị a azọpụta site na okwukwe na Jizọs Kraịst n'ụwa. Ha bụ nke elu-igwe site na mkpagbu na-amalite na-ama mgbe mbụ malite akara.
Owuwe bụ a omimi
1 Ndị Kọrịnt 15:51 - Lee, m na-agwa gị ihe omimi: Anyị ga bụghị ihe niile na-ehi ụra, ma anyị niile ga-agbanwe, Na a oge, na ntabi anya, na-afụ opi ikpeazụ.
P recis na chọọchị bụ na nzuzo nke e kpugheere site Paul, otú a kwa bụ owuwe, a nzuzo a na-ekpughere anyị. Okwu Grik maka nzuzo bụ "Mysterion" ebe huvudbetydningen bụ "ihe na-bụ kpam kpam ọhụrụ na ọ bụghị n'ihu."
Anyị chọta dịghị häntydningar ka zute na OT, na ọ pụtara na Jizọs akụzighị owuwe, ma naanị ya anya bịa Israel. Owuwe bụ a omimi esote Paul egosi n'ihu mkpughe na Chineke nyere ya. Owuwe kọwara 1 Cor 15 na 2Thes abụọ
70 izu nke afọ
P rofetian nke Daniel na-ekpuchi 70 izu nke bụ a betydningsfull osisi nke Israel si akụkọ ihe mere eme na amụma usoro iheomume, nke gbatịrị kpam kpam site na ndọrọ n'agha gaa Babilọn Kraịst nke na-abịanụ ka Messiah nke Israel.
Dan 9:24 - Asaa izu na-ekpebisi ike n'elu gị na ndị n'elu gi n'obodo nsọ ahụ na-akwụsị ndị mebiri, mechie mmehie kpuchie n'ihi na ikpe ọmụma, weputa ihe ebighị ebi ezi omume, mezue ọhụụ na amụma, na manu nke Kasị Nsọ.
The 70 na n'izu ikpeazụ nke afọ nwere na Israel na ndị Juu na ndị mmadụ na-eme ma ọ bụghị n'ọgbakọ. Na Dan 9:24, anyị pụrụ ịhụ na ihe niile izu 70 nke afọ nwere na ndị Juu na ndị na Jerusalem na-eme. Dị nnọọ ka ndị mbụ 69 izu enweghị ihe ọ bụla na ọgbakọ ya na-eme otú nwere abụghị nke ikpeazụ izu nke afọ na ọgbakọ ya na-eme.
Israel na ụwa
D a urua afọ bụ nke na-mkpagbu dị ka a kọwara n'Isi nke Up 6-19, na bụ ihe Chineke mere na Israel na a kpọrọ. The chọọchị bụ mgbodo nke a na nsogbu ke n'etiti 69th na 70 izu nke afọ, bụ nke a kọwara na amaokwu nke 26 - ma ọgwụgwụ abịa dị ka a iju mmiri. Iji ọgwụgwụ ga-enwe agha. Mbibi na-ekpebisi ike.
Chineke na-apụghị rụchaa ha omume na Church na Izrel tupu o mezuworo ịlụ ndokwa na ha.
Church afọ nsọtụ
A lltså Chineke, tupu anyị na-aga n'ime ikpeazụ izu nke afọ, na-emecha ihe anyị na-akpọ ọgbọ ụka, nke malitere na Pentikọst, na aka iso maka afọ 2,000. Mgbe Chineke nke ọma nwere biri nke ọgbọ ụka, Chineke nwere ike nọgide na ha "omume na Israel."
Ọgbụgba ndụ ya na Israel nwere ike na-emezu afọ asaa ikpeazụ nke amụma Daniel. Mgbe nkwa Chineke kwere Israel gị adabere n'ihe ụfọdụ, ọ bụ naanị Chineke bụ onye nwere ike imezu ha. Ná Ndị Rom isi 11, Pọl na-akọwa na Chineke ga-akwụsị ya omume na chọọchị tupu ọ pụrụ ịnọgide na ya atụmatụ na Israel.
Ọrụ 15:14 -16 - Simeon ka a kọwara otú Chineke mbụ mere n'aka o meriri a ndị maka aha ya n'etiti mba nile (NT-Assembly). Ọ bụ agbanwe agbanwe na Okwu ndị amụma, nke na-ekwu: Mgbe nke ahụ bụ jụụ m ga-alaghachi wee wughachi Devid dara tent.
V n'ịhụ zipụta ha n'usoro mkpezi ikpe na Jekọb. Mbụ wee ọgbọ ụka, na mgbe ahụ, na ọ ga-ewughachi Devid dara tent.
Mkpagbu bụ a nkwadebe maka Israel n'iru Millennium. Israel ga-enwe ike ịhọrọ àmà na-egosi na Kraịst. N'oge mkpagbu ikpe Chineke nke Israel mgbe ịkpọ ndị Juu na ndị n'ime Alaeze Mezaịa. Iwe Chineke ga-eme ka Israel na mba onwe ya na nchegharị.
Day nke Jehova na Jizọs Kraịst taa
N'ebe a, anyị na-ele ndị NT Church, na karịsịa na oge nke Assembly owuwe bụ nke dị oké betydning na anyị maara na ihe dị iche na ụbọchị Jehova na Jizọs Kraịst taa. Na mbụ ọtụtụ ndị chere, o nwere ike anya dị ka ọ na-ekwu banyere ụbọchị, ma nke bụ eziokwu bụ na ndị a "abụọ" ụbọchị ndị nke kpamkpam dị iche iche agwa na nwere kpamkpam dị iche iche ọdịnaya maka njedebe oge.
Zef 1: 14-16 - Jehova nnukwu ụbọchị dị nso, nso, na ọ ga-ọsọ ọsọ. Ntị, nke a bụ ụbọchị nke Jehova! Mgbe ahụ were olu dike nke nchegbu. A ụbọchị nke iwe bụ na ụbọchị, a ụbọchị nke nhụjuanya na ahụhụ, a ụbọchị nke Mbibi na nke ịtọgbọrọ n'efu, ụbọchị ígwé ojii na haze, a ụbọchị mgbe ụda nke mpi na-eti mkpu ngagharị iwe megide ndị e wusiri ike murtornen ...
2 Ndị Tesalonaịka 2: 2 - Mgbe ọ na-abịa Onyenwe anyị Jizọs Kraịst na anyị na-achịkọta ya, anyị na-arịọ unu, ụmụnna, ọ bụghị na mberede ida ọkwá ya na ụjọ adịghị, site ọ bụla mmụọ ma ọ bụ site na okwu ma ọ bụ akwụkwọ ozi, purporting na-n'aka anyị ma na dabeere na ụbọchị Onyenwe anyị abịa.
N bụ ụbọchị Jehova ka ọ bụrụ na ọ bụ, ọnụma na domstid ga-aga n'elu ụwa na a oge sitere na site owuwe (mkpagbu mmalite) na Millennium. Jesus Christ taa bụ kwuru na Old Testament, dị ka ọ nwere na-ata na nzuzo na-eme, ya bụ, eziokwu nke NT chọọchị, na owuwe nke ebube.
Jesus Christ taa bụ naanị a NT echiche. Jehova Day abụghị nanị onye na OT echiche, ma dommens oge nke mba ọzọ zuru ezu na NT na karịsịa kọwara ná Mkpughe isi nke 6-19. "Jehova Day" banyere ụwa na ndị mmadụ na ụwa mgbe Jesus Christ taa banyere NT Assembly owuwe na nkwadebe tupu Nna ya n'eluigwe.
B etydningen nke amaokwu a bụ na mmụọ nsọ na Pentikọst malite ọrụ site na-ahọpụta a eluigwe ndị mmadụ, ga-n'ụzọ zuru ezu iri na-eme ka ndị a zuru ike na-esote Jesus Christ taa, na-esote Jesus ka eme n'ụlọ ya n'ọgbakọ ka eluigwe n'ebe-obibi-- nke si otú na-ewe ebe tupu ụbọchị Jehova.
The chọọchị na Thessalonica
2 Ndị Tesalonaịka 2: 1-12 - The chọọchị na Thessalonica ama ụjọ ozizi ụgha ndị e akụzi na ụbọchị Jehova, na ihe nile ọ na-egosi na iwe na mkpagbu malitere. Ọ ọbụna anya dị ka onye zitere adịgboroja akwụkwọ ozi na nyere onwe ya iji Paul, na-enye ozi nke ikike. Paul dọrọ aka ná ntị ike megide ozizi ụgha, na-amalite na-akụzi eziokwu banyere nke a "n'ụbọchị Onyenwe anyị".
Akpa, Paul na 1 Ndị Tesalonaịka 1:10 kwere nkwa na ọgbakọ na Jizọs ga-azọpụta ha iwe na-abịa, gịnị mere ha consternation ka nnọọ ukwuu mgbe ha na mberede chere na ha nọ n'etiti ya. Paul emesi ha obi ike na-enye ọgbakọ n'ụbọchị Onyenwe anyị ike imalite tupu onye nke mmehie, na àmà na-egosi na mbụ pụta, na underlines na a na-apụghị mere tupu "na-egbochi" emewo mbụ e ekpochapụworị ụzọ. (First mwepụ), Danish translation)
Onye ma ọ bụ ihe na-ejide azụ?
V ers 4-8 igosipụta àmà na-egosi, na onye na-esetịpụ ya azụ nke na ọ pụrụ bụghị na-abịa n'ihu. Taa, anyị na-ede 2013, anyị nwere ike ikwubi na ọ / onye esetịpụ azụ ka ebe a mgbe àmà na-egosi adịghị abịa n'ihu ma. Gịnị na-eme ọzọ na-aghọ ma kọwara dị ka "ọ" na "o". The okwu mmụọ Mmụọ Nsọ bụ okwu "pneuma" n'asụsụ Grik. E nwere a okwu na intetkön.
The eziokwu na nke Mmụọ Nsọ n'otu oge ahụ bụ Chineke, ọ na-kọwara dị ka "o". E nwere ọtụtụ guesses na ihe na-egbochi àmà na-egosi, ma na ha abụọ bụ ndị enweghinke obu mgbe oke nwere ike ọ bụla ndị ọzọ karịa nke Mmụọ Nsọ. Mmụọ Nsọ nwere njikọ chiri anya nke ụka, na kemgbe ebe ọ bụ na ụbọchị Pentikọst Ọrụ 2nd Na GT yiri Mmụọ Nsọ nakwa n'ụwa, ma, kama site n'elu. Dị nnọọ ka ọ ga-eme mkpagbu.
D Mmụọ Nsọ-abịa n'ime mkpagbu ga-anọgide na-arụ ọrụ n'ime ụmụ mmadụ ma si uppryckelsens oge site n'elu. Ya mere, anyị na-adịghị ahụ Mmụọ Nsọ-anọchi anya n'Isi nke 3 nke akwụkwọ bụ Mkpughe. N'akwụkwọ ozi ndị na asaa ụka, anyị na-anụ okwu ndị a: Onye nwere ntị, ya nụrụ ihe mmụọ nsọ na -agwa ọgbakọ. Mgbe Ibuot 3, nke bụ Assembly owuwe bụ agaghịkwa Mmụọ Nsọ na-ekwu. Nkpughe 13: 9 - Onye nwere nti, ya nu . Ma ọ bụ na Mmụọ Nsọ nke na-abịa dị iche iche na nzoputa ma ozi ikpe ndị mmadụ na mkpagbu, ọ ga-eme site na mmụọ ozi. ( Mkpu 14: 6-7 ).
Mgbe Assembly na-ejide ndị na Mmụọ Nsọ nwere dịghị ebe na-arụ ọrụ site na ihe mgbe Assembly bụ naanị temple na Chineke maara taa. (1 3:16). Naanị chọọchị ahụ na-anọchi anya na mkpagbu ahụ na-skökoförsamlingen, na ike nke Mmụọ Nsọ na-adịghị arụ ọrụ site n'aka.
Waste ma ọ bụ ọpụpụ?
2 Ndị Tesalonaịka 2: 3 - ..Ty mbụ, ndị n'efu ga-abịa na nwoke nke mmebi iwu, nwa adiana ke adiana, n'ihu ọha bịa n'ihu
D et okwu Grik a sụgharịrị n'efu, okwu "apostasia". Nke ozo bu "apostasia" sitere na ngwaa "afistemi" onye huvudbetydning "na-akpụ akpụ" ma ọ bụ "ime ihe si n'otu ebe gaa ebe ọzọ." The okwu na-eji kpọmkwem na njikọ na ihe ọ bụla na-akpali akpali site na otu ebe gaa ebe ọzọ, ma ọ bụ ma ọ bụrụ na ọ na-aga pụọ ma ọ bụ dị iche iche site mmadụ.
The okwu nwekwara ike ga-eji na njikọ na okpukpe seduction ma ọ bụ n'efu na kọwara na 1 Tim 4: 1. Ụfọdụ ndị mbụ Protestant Bible nsụgharị họọrọ ịsụgharị English okwu "ọpụpụ", nke pụtara pụọ ​​ma ọ bụ na-apụ n'anya.
Ụfọdụ ndị ọzọ maara nke ọma Bible nsụgharị nke sụgharịa okwu akwụsị / pụọ gụnyere Kenneth Wuest, Genovabibelen Jọn Dawson, Coverdale, Crammer wdg Ị ga-achọ onye nsụgharị ji okwu bụ "ọpụpụ" kama nke n'efu ga-doro anya na-enye ihe doo anya karị na ikwu na owuwe na mkpagbu. Ọ na-chọrọ inye a ọtụtụ ihe uche na ikwu na nghọta nke teksten si ma 1 Ndị Tesalonaịka na 2 Ndị Tesalonaịka.
Assembly agaghị abanye mkpagbu ma ọ bụ na-ata ahụhụ iwe nke Chineke
Up 6: 16-17 - Ma gwara ugwu na oké nkume, "Fall na anyị ma zoo anyị si ya ihu na-anọdụ n'ocheeze ahụ, dịkwara Nwa atụrụ ahụ iwe. N'ihi na iwe ya nnukwu ụbọchị abịa, na ònye pụrụ iguzo?
Rev 15: 1 - M wee hụ ọzọ dị ukwuu na ebube ịrịba ama n'eluigwe: ndị mmụọ ozi asaa ji ihe otiti asaa, nke ikpeazụ, n'ihi na ha ọnụma nke Chineke na esịmde mmezu ya.
V si mgbalị bụ otu ihe ahụ dị ka ụbọchị Onyenwe anyị, nke bụ otu ihe ahụ dị ka oké iwe Chineke. The dum Mkpagbu bụ oké iwe Chineke, ma ọ bụghị nanị na akụkụ ikpeazụ nke den.Vi pụrụ ịhụ na ugbua na 6 akara otú nwere Nwa Atụrụ ahụ iwe na-abịa. Na Isi nke 15, anyị na-ahụ na ọnụma Chineke na a ga- dechara na asaa ikpeazụ otiti. Ọ pụtara na ọnụma Chineke na-adịghị nwere mmalite ya na ihe otiti asaa, ma ọ ga-amalite na mbụ.
Na asaa ikpeazụ otiti agwụ mkpagbu na iwe nke Chineke. Na Tesalonaịka 1: 9-10, anyị na e kwere nkwa na-eche maka Jizọs site n'eluigwe (owuwe), otu na agbapụtawo anyị iwe na-abịa.
1 Ndị Tesalonaịka 1: 9-10 - na-eche maka Ọkpara ya si n'eluigwe, Chineke kpọlitere n'ọnwụ, Jizọs bụ onye napụtara anyị iwe na-abịa.
1 Ndị Tesalonaịka 5: 1-9 - v.2 Ị maara nke ọma na ụbọchị Jehova (iwe / mkpagbu) ga-abịa dị ka onye ohi n'abalị. V.9 - N'ihi na Chineke adịghị inye anyị ka anyị na-ata ahụhụ iwe ma na-enweta nzọpụta site n'aka Onyenwe anyị Jizọs Kraịst.
D otu ngalaba anyị dị na-agụ bụ akpali nnọọ mmasị. 1 Ndị Tesalonaịka isi 4:13 n'ihu bụ banyere Assembly owuwe na zutere Jizọs na mbara igwe. Paul ewepụta azụ owuwe na ikwu na mkpagbu a ga-akọwara ke Ibuot 5: 1-3.
Ọ na-aga na-akọwa na ụbọchị, na ụbọchị Onyenwe anyị nwere ike iju anyị anya dị ka onye ohi n'ihi na anyị bụ nke ìhè. Ọ na-agwụ ya niile site na egosi na ọ bụ mkpagbu ọ kụziri, na ana achi achi na anyị anaghị shei iwe, ma nzọpụta site Jesus.
F ugw Philadelphia, na-anọchite anya otu n'ime mmadụ abụọ ọgwụgwụ oge ụka e kwere nkwa na a ga-edebe si hour ọnwụnwa, nke ga-abịakwasị ụwa dum. Nkwa a bụ otu ike nkwa na chọọchị ga-ezute Kraist ẹkenịmde ikpeazụ izu nke afọ.
Mkpughe 3:10 - N'ihi na unu na-edebe okwu m banyere ntachi obi, m ga na-ị na-azọpụta gị si hour ọnwụnwa, nke ga-abịakwasị ụwa dum ma na-ewetara ya ka ndị mmadụ ule .
Okwu Grik maka echebekwa okwu Grik bụ (na baraaka). The ngwaa na-eji ugboro abụọ na n'amaokwu a. The oge mbụ ọ ga-sụgharịa echebekwa , ma na nke abụọ oge na-azọpụta gị si na Swedish translation. Na Mb bụ ma a sụgharịrị ịbụ site n'ichebe enye a kpamkpam dị iche iche betydning:
10 N'ihi na i debere okwu nke m ndidi, m ga-na-gi si hour ọnwụnwa, nke ga-abịakwasị ụwa nile, na-agbalị ka ha na-ebi n'elu ala. (King James Version)
Thayer rụrụ ụka na mgbe okwu a na-eji okwu Grik "otu", ọ pụtara "iguzosi ike n'otu ihe," ma mgbe ọ na-eji na "oak" ọ pụtara dị ka King James translation ka "ẹnịm si". N'otu aka ahụ, "oak" ji mee ihe mgbe ọ na-e sụgharịrị na 1 Ndị Tesalonaịka 1:10 - .. onye agbapụtawo anyị si iwe na-abịa. John chọrọ igosi na ọ bụ "oge awa nke ọnwụnwa," ka o dere, "a tii akwụna". Kama ahọrọ John dee "ek tes horas" nke putara " si hour nke ikpe"
N'ihi na onye bụ Mkpagbu?
Mkpughe 3:10 - hour ọnwụnwa, nke ga-abịakwasị ụwa dum ma na-ewetara ya ka ndị mmadụ ule .
A TT hour n'ọnwụnwa bụ ngosipụta nke oké iwe Chineke na ihe ga-abịa nke ụkpụrụ, ọtụtụ-ekweta. Ma, gịnị mere uche ya? Ọ na-agbalị na-ọcha ọgbakọ? Ọ dịghị, ọ bụ na-etinye ndị bi n'ime ya, ofụri usu, ule. Nke a bụ iji na ndị na-ekpe n'ụwa mgbe owuwe, na ndị sonyeere àmà na-egosi.
Okwu ahụ bụ "ndị bi n'ime ya" (katoikeo), nke na-eji ebe a bụ a siri ike okwu. Okwu bụ banyere ihe adịgide adịgide na mgbe nile. Nke a pụtara na ikpe maka ndị mere ụwa ha ezi obibi, na-egosipụta na Earth azụmahịa na okpukpe. Ha mere ụwa ya na-adịgide adịgide n'ụlọ, nke apụghị na-ezo aka Assembly.
The ezi Church na-emi esịnede ndị bịara abịa na ndị mbịarambịa na ụwa a. (1 Pet 2:11), na-achọ ndị kasị High (Kọl 3: 1-2) na-enwe mba ha nke eluigwe (Efe 2:19), na-enwe ebe obibi ha nke elu-igwe (John 14: 2) .
Ònye na-anyị na-eche?
Tit 2:13 - ezie na anyị na-echere maka gọziri agọzi olileanya nke Chineke ukwu anyị na Fräsare Jesus Christ ga-egosi na ebube.
D t bụ doro anya na anyị na-atụ anya na anyị ọṅụ bụ Jizọs na-abịa. Anyị kwesịrị na-eche àmà na-egosi, mkpagbu na iwe nke Chineke. Ọ bụrụ na Chineke bu n'obi ka ndị ya na-aga site na mkpagbu na-emegide Kraịst na ụlọ, ọ na-dọrọ aka ná ntị na-akwadebe ya n'ọgbakọ na ya. N'ihi na ikpe, àmà na-egosi na-abịa n'ihu tupu owuwe nwere ike ime.
The ozi ọma nke a nke alaeze
D et Ma ọ bụ ozioma nke amara na a ga-ekwusa mkpagbu, ma kama nke ozioma nke ala-eze. Nke a gospel a na-ekwusa site na 144,000 a hoputara ndị Juu ga-akpọsa Messiah mweghachi nke Alaeze Mezaịa. Gospel of amara dị ka anyị maara na ọ ga-agwụ agwụ na na ọgbọ ụka gasịrị.
The nwụrụ n'ihi okwukwe na-arịọ Chineke ịbọrọ onwe ha ọbọ na ndị iro ha. Nke a nwekwara adịghị onye kwere ekwe na-agba akaebe na Assembly nnọkọ. Anyị na-adịghị na-arịọ Chineke imegwara ndị iro anyị, anyị na-arịọ Chineke ịzọpụta mmadụ nile. (Ndị Rom 12:19) The àmà abụọ na-na-na-ike ọbọ onwe ya na-ata ndị iro ha.
F örsamlingens owuwe bụ na nzuzo na-esote Paul nwetara ya gabiga na Assembly. Ya mere, anyị na-anụghị Jesus na-akụzi banyere owuwe. Jesus ọkwọrọde mbilite n'ọnwụ na n'ụbọchị ikpeazụ, na ya anya na-Israel.
Dan 9 n'ụzọ doro anya na-egosi na 70 izu nke afọ bụ maka Israel na Jerusalem abụghị maka ọgbakọ ahụ.
Site emegharị Chineke usoro ihe omume Israel na Church ga-abụ na ihe ọjọọ. Site ọtụtụ akụkụ Akwụkwọ Nsọ, Jehova kwere anyị nkwa na chọọchị abụghị scalable iwe, ma a ga-azọpụta site na ya. Iwe ma ọ bụ na ụbọchị Jehova bụ dum oge nke afọ asaa. The Assembly ga-Ya mere raptured tupu urua afọ amalite. Dị nnọọ ka Filadelfia ọgbakọ ga-nọ na-na oge awa nke ikpe.
Mgbe n'Isi nke 3 nke n'Akwụkwọ Mkpughe, anyị na-aba bụ ọgbakọ nke isi 6-19 bụ nke na-mkpagbu nke afọ asaa. Anyị na-ele ma ọ bụ Mmụọ Nsọ, nke nwere njikọ chiri anya na chọọchị. Mgbe Mmụọ Nsọ onye bi na zọpụta na-arahụ site na ụwa, ọ bụ free maka àmà na-egosi na ụlọ Ya. Naanị chọọchị ahụ na-laghachi bụ nwaanyị akwụna.
Anyị na-achọta ihe ọ bụla gosiri na Assembly ga-site na mkpagbu, ma nke ahụ, a ga-edebe na ya. Anyị shei na-eche ka Jizọs Kraịst taa na-ebi n'obi anyị. Ahụhụ ma ọ bụ Jekọb nsogbu bụ n'ihi na ndị bi n'ụwa. Israel na ndị Juu ga-agbalị na a n'ụzọ pụrụ iche ma ọ bụrụ na ha chọrọ ma na Jizọs bụ Mesaya ma ọ bụ. Àmà na-egosi na oge ya ụlọikwuu nke Chineke onye bụkwa otu. The parish na-anọchi anya na elu-igwe ọbụna ná mmalite nke mkpagbu ka ndị okenye 24. Mgbe Onyenwe anyị laghachi n'ụwa na Mkpughe 20 dị ka Assembly, ọnụ na ndị mmụọ ozi.
D et nke a bụ n'ihu nke mbụ post "Jizọs laghachiri tupu oké mkpagbu ahụ," nke dika bụ a na-azara ọnụ maka na Nga tribläran nke pụtara na owuwe nke kwere ekwe emee tupu mkpagbu. Anyị na-achọta ọtụtụ ikike ngwọta na OT na ndị nlereanya na owuwe, mkpagbu na ugboro anyị bi. Achọrọ m egosi ụfọdụ ikike ngwọta si gt nwere ike ele ma na-egosi a owuwe tupu mkpagbu.
N na-ekwu okwu banyere ahụhụ anyị ga-amalite site ịmata ihe dị iche izugbe ahụhụ anyị na-ezute na ụwa (gr.thlipsis) na ahụhụ anyị na-ezute na oké mkpagbu (gr.Thlipsis Megas) na Jizọs na-ekwu nke na Matiu 24, na Daniel n'Isi 12. na ụwa a ezi ndị kwere ekwe ga-enweta a agha ime mmụọ megide principalities na ike, anụ ahụ onwe ha, na-ata ahụhụ maka ozioma. Ụdị nhụjuanya, Jizọs mgbe kwere anyị na anyị ga-free si. The iwe anyị na-ezute na mkpagbu ahụ na ihe dị iche iche na ihe na okwu kwere nkwa anyị na anyị ekwesịghị-enweta ma ọ bụ na-aga site.
Na nso nso a karị ka iwe Chineke malitere nwere dị iche iche betydningar ndị mmadụ. O kwuru banyere iwe nke Nwa Atụrụ ahụ, Man iwe, Setan iwe na ọnụma nke Chineke na confuses ya. E nwekwara esemokwu na ma na mgbe na otú ọnụma nke Chineke na-adị.
Na Mkpughe, anyị pụrụ ịhụ na mkpagbu na-amalite n'Isi nke 6 nke isii mbụ akàrà agbajikwa site Nwa Atụrụ ahụ na-agwụ na Chineke asaa vials nke ọnụma na isi 16-18. Ugbua n'oge isii mbụ akàrà, anyị na-ahụ a na-agbawa obi mmetụta na ndụ n'ụwa. Isii mbụ akàrà-eweta agha, ụnwụ nri, otiti na-akpata ọnwụ maka a ụzọ n'ụzọ anọ nke ndị bi n'ụwa. Ndị ọzọ okwu, banyere 1.7 ijeri mmadụ ga-anwụ n'oge na-isii mbụ akàrà. N'akụkụ a ga-nwụrụ n'ihi okwukwe nke ndị na-aghọ ndị kwere ekwe n'oge mkpagbu.
Mgbe ndị mmụọ ozi na-afụ na asaa opi asaa ya mere na ọ na-akpalite akpaka ọhụrụ mpụ kpebisikwuo nke ụwa. Ndị a ikpe na-agwakọta ike ọdachi na ike karịrị nke mmadụ ihe otiti. Mgbe asaa opi asaa dị njikere na mgbu ha otú nwere a atọ nke mmiri bibiri, a atọ nke ihe niile dị ndụ n'ime oké osimiri ahụ nwụrụ, na a n'ụzọ atọ nke ụwa ga-akpọ ọkụ, na a atọ nke ndị mmadụ na-anwụghị isii mbụ akàrà ga-anwụ. Na ọzọ okwu, ihe ọzọ dị 1.7 ijeri mmadụ nke ụwa bi.
Iwe ọkwá enwezu ikpe Chineke ọgwụgwụ
V na ọ dịghị okwu na otú ọtụtụ ndị mmadụ ga-ekwe mee ka ndụ iwe nke efere ma anyị nwere ike na-eche na. Jizọs n'onwe ya kwuru na ọ gwụla ma na oge a na-shortened, ọ dịghị mmadụ ga-azọpụta (Matthew 24:22). A iwe nke niile decription, na ọ bụ ike ịghọta na ya pụta ma ọ bụ betydningen nke ha.
Ndị a vials nke iwe-aghọ ẹkụre ikpe Chineke ọgwụgwụ. Rev 16: 16-21 na-ekwu banyere ndị dị otú ahụ a nnukwu ala ọma jijiji na e nwere emewo mgbe mgbe ihe ọ bụla dị ka ya n'ihu. The N'ihi ya nke na ọ ga-eme otú niile na agwaetiti na-agba ọsọ, na n'ugwu na-agaghị adị ọzọ. Kwere m mgbe m na-ekwu na ọ dịghị onye chọrọ abụ n'ụwa n'oge ahụ.
Mkpagbu bụ n'okpuru iwe na-abịa
M n ọzọ okwu, ọ bụ mkpagbu nke oge mgbe ọnụma nke Chineke na-egosipụta na wụsịrị ná mba ndị ọzọ n'ụwa niile. The iwe abụghị ihe dị mfe n'ụbọchị, dị nnọọ ka ụbọchị Onyenwe anyị na ọ bụghị ya ma. Iwe Chineke, iwe, ụbọchị Onyenwe anyị, iwe na na. bụ oge na-amalite na-akpa akara na-agbajikwa na culminates na Jesus anya bịa Israel na ụwa, ebe iwe Chineke ga-ekpughe.
Pọl mere ka o doo anya na Assembly ga-n'ụwa n'oge a nke ikpe-agwụcha na mkpagbu na. Na 1 Ndị Tesalonaịka 1:10 Paul na-ekwu okwu otú na Onyenwe anyị ga-azọpụta anyị iwe na-abịa. Okwu si na isi ederede pụtara site ewere n'ime akaụntụ ma na oge na ebe, nke mere na anyị na ndị ọzọ okwu, agaghị enwe ugbu mgbe ọ na-eme. N'ihi na Chineke abụghị inye anyị na-ata ahụhụ iwe ma na-enweta nzọpụta site n'aka Onyenwe anyị Jizọs Kraịst.
Iwe Chineke dịruru dum mkpagbu
N ọ bụ banyere iwe Chineke mere mgbe-egosi ndị mmadụ na ọ bụghị otu ihe ahụ ka oké mkpagbu ahụ, ha na-nnọọ ziri ezi. Oké mkpagbu ahụ bụ 3,5 afọ malite na nke ihe arụ nke ịtọgbọrọ n'efu na oke iwe nke Chineke ma ọ bụ iwe dịruru ofụri mkpagbu nke afọ asaa.
Up 6: 16-17 - "Fall na anyị ma zoo anyị si ya ihu na-anọdụ n'ocheeze ahụ, dịkwara Nwa atụrụ ahụ iwe. N'ihi na iwe ya nnukwu ụbọchị abịa, na ònye pụrụ iguzo?
Rev 15: 1 - M wee hụ ọzọ dị ukwuu na ebube ịrịba ama n'eluigwe: otiti asaa, nke ikpeazụ, n'ihi na ha ọnụma nke Chineke na esịmde mmezu ya.
N'ebe a, anyị na-ahụ na ọbụna na isii akara otú nwere Nwa Atụrụ ahụ iwe na-abịa, nke bụ otu ihe ahụ dị ka oké iwe Chineke, mgbe Nwa Atụrụ na Nna ahụ nwere otu onye ahụ. Ọtụtụ mgbe, dị ka a na-na kwuru na asaa ikpeazụ otiti - onye bụkwa iwe Chineke bụ iwe nke Chineke. Ma na isi 15: 1 anyị pụrụ ịhụ na oke iwe nke Chineke esịmde ya consummation na ikpeazụ ndị a otiti, na bụghị mmalite ya. N'ihi ya, ọ bụ nanị finishing nke oké iwe Chineke oge agwụcha na ikpeazụ otiti asaa.
Zọpụtara si oge na ebe
A Braham Jehova chetaara ha esemokwu banyere Sọdọm na Gọmọra ga-megidere ọdịdị ya na-ebibi ndị ezi omume na ndị ajọ omume (1 Exodus 18:23).
Peter na-akụziri anyị site n'inye anyị ihe atụ nke Lot na-egosi na Lot abụghị a nwa oge ka ihe atụ, ma a n'ozuzu ụkpụrụ Chineke si n'akụkụ, na Onyenwe anyị "na-azọpụta ndị na-asọpụrụ Chineke nke ọnwụnwa" English translation: Onyenwe maara otú iji napụta Chineke ma site ọnwụnwa ". Okwu Site (si) pụtara oge na ebe nke ihe omume a.
Ịdọ aka ná ntị Church
F Ragan bụ ma anyị nwere ike ịchọta okwu nile nke Jehova na-ekwu okwu nkasi obi ma ọ bụ ịdọ aka ná ntị ya na-alụ ọhụrụ na-eche ihu iwe na-abịa? Anyị nwere ike ịhụ okwu nke O kwere nkwa iji chebe ma chebe anyị site na nke a egwu mgbe mkpagbu ahụ bụ? Anyị pụrụ ịhụ Assembly adị n'oge mkpagbu?
Ọ dịghị, anyị na-enweghị ike! Dị nnọọ n'ihi na ọ hänvänder ka Israel mgbe ọgbakọ na-arahụ, na ike na-ya omume na Israel n'oge ikpeazụ izu nke afọ, mgbe ọ na-ekwe nkwa anyị na anyị kwesịrị agaghị emetụta iwe na-abịa.
Dị ka ụbọchị Noa
Matthew 24:37 - N'ihi na dị ka ụbọchị Noa dịrị, otú a ka Nwa nke mmadụ na-abịa.
H Erren chọrọ ka anyị na-amụ Noa na-eji tụnyere ihe Itie nchupu. Na Matiu 24:37, anyị na-agụ na na otú ahụ ka ọ dị n'ụbọchị Noa biri ndụ ọ ga-abụ na Jehova nloghachi. Ihe anyị nwere ike ịmụta site na ụbọchị Noa bụ banyere oge tupu Iju Mmiri ahụ, Iju Mmiri ahụ na Jehova na-echebe aka Noa na ezinụlọ ya.
Jisọs ka na-akọwa na ndị na-adị ndụ mkpagbu ga-ozugbo-ekpe ikpe tupu 1000 afọ alaeze. Ụfọdụ ga-ezute Kraist n'ime ikpe na-ekwe ka na-aga n'ime Alaeze Mezaịa. N'otu ụzọ ahụ dị ka iju mmiri ahụ, ndị mmadụ ga-ezute Kraist n'ime ikpe. The ndị mmadụ nke ụbọchị Noa wee n'okpuru n'ihi iju mmiri ahụ, na na otú ahụ, ndị mmadụ ga-ala n'iyi n'ime mkpagbu, na straks mgbe Jizọs ikpe.
Ụdị mmadụ atọ
D et ndị atọ dị iche iche iche iche nke ndị bi na ụbọchị Noa tupu iju mmiri ahụ bịara. Ọ bụ na-ekweghị ekwe bụ onye jụrụ okwu Jehova, na ihe nile n'iyi na iju mmiri ahụ. Ọ bụ Noa na ezinụlọ ya na-e chebere site Iju Mmiri ahụ, ọ bụ Enoch bụ onye na-ejide elu si Chineke tupu iju mmiri ahụ bịara. Onye ọ bụla na ha onwe ha ụzọ na-anọchi anya ndị atọ dị iche iche ige na anyị nwere ike iji tụnyere oge anyị taa. Na nnọọ otu ụzọ anyị na-ahụ ụdị mmadụ atọ n'ụbọchị ahụ mgbe anyị na-akpụ akpụ kwupụta mkpagbu na-agwụcha oge:
· The ndị mmadụ ndị nke lara n'iyi na Iju Mmiri nke ụbọchị Noa na-anọchi anya na-ekweghị ekwe, ndị na-weere na Jizọs dị ka Onye Nzọpụta ha. Ndị ga-aga n'ime mkpagbu, na-gụrụ iwe nke Chineke. Ndị na-adịghị echegharị na Mkpagbu ga-ekpe ikpe Jizọs na ga-ahụ ga na-ajụ n'ime ọdọ ọkụ ọkụ.
· Noa anọchi anya ihe fọdụrụ nke Israel na Onyenwe anyị ga-mezue ha nkwa na 1000 afọ Reich. Noah si otú a họọrọ nke Israel, nke na a ụfọdụ ụzọ a ga-echebe n'oge mkpagbu. 3.5 afọ n'ime Mkpagbu ga Juu ahụ kwere ekwe na-agbapụkwa n'ime desert ebe Jehova ga-echebe ha n'ihi na àmà na-egosi ya mkpagbu. Noa chebere site na iju mmiri ahụ na a ga-enwekwa a akụkụ nke ndị Juu na ndị na-adị.
· Enoch bụ a na foto nke ọgbakọ ndị na-abụghị akụkụ nke Iju Mmiri na ikpe Chineke mgbe ọ na-etinye na-ejide na iwere Chineke tupu iju mmiri ahụ bịara.
Enoch / Enoch bụ ụdị nke Assembly
1 Genesis 5:24 - Ma Enoch n'ụzọ a jere ije na Chineke, ọ bụghị n'ihi na Chineke kuru ya.
H Änok bụ nnọọ okwu nlereanya nke Assembly owuwe vesos oge maka mgbochi Christian mkpagbu. Enoch bi na 7th ogbo si Adam, na biri na a pụrụ nnọọ iche oge, ya bụ na oge tupu Iju Mmiri. Okwu na-ekwu na n'oge ahụ otú ajọ omume nke mmadụ dị ukwuu n'ụwa, na ndị mmadụ n'obi na ebumnobi ndị kpamkpam ọjọọ mgbe niile.
Na n'etiti ndị a na-eme mmehie ụmụ mmadụ mkpọtụ, e nwere otu nwoke, Enoch, bụ onye kweere na Chineke na-eje ije na ya. (1MOS 5:24) The àmà nke Enoch bụ na ọ hụrụ amara nke Chineke. (Heb 11: 5)
Enoch e jidere elu
Hibru 11: 5 - Site okwukwe Enoch a napụrụ na-enweghị ihu ọnwụ . Na ha hụrụ ya ahụghị ya, n'ihi na Chineke weere ya ka ya onwe ya .
H Änok e jidere enweghị akatabi okop ọnwụ maka na Chineke weere ya ka ya onwe ya. Na oge tupu ya owuwe dị ka kwusara Henọk, nke ndị nke oge ya, banyere ọbịbịa gbakee na ntaramahụhụ nke mmehie na asọpụrụghị Chineke. Mgbe mmehie mgbaru ọsọ e ruru bịakwara Chineke ikpe mmehie na ụbọchị Noa na o zitere ka iju, ma mgbe e Enoch ama-ejide Jehova.
Iju Mmiri bụ a na foto nke iwe nke Chineke ga-eziga n'elu ụwa, na ndị ọjọọ na ndị na ọgwụgwụ mgbe ụfọdụ - iwe na-abịa (1 Ndị Tesalonaịka 1:10)
Gaa ebe ọzọ
D et okwu Grik maka "e ya onwe ya" bụ metatithemi, na bụ na KVJ sụgharịrị ịbụ "transportet", ie na-agafere, gaa ebe ọzọ. Enoch bụ ndị ọzọ okwu, ma ọ bụ ụgbọ kwagara n'ime heaven n'ihi na ọ ga agaghị edetụ ọnwụ ire. 1 Kọrint 15 na-agwa gị na ọ bụghị onye ọ bụla kwesịrị na-ehi ụra, ma ihe niile ga-gbanwee. Ọ bụ Paul onye na-akọwa na owuwe nke township ebe bụghị onye ọ bụla ga-eche ọnwụ ihu, ma ahụmahụ na Onyenwe anyị na-ewe anyị n'ụlọ ya.
Dị nnọọ ka Enoch na-anọchite anya Assembly owuwe tupu mkpagbu, na-anọchite anya Noa na ezinụlọ ya, ọ kwere nkwa fọdụrụ nke Israel, nke a ga-echebe site mkpagbu, ma na-enweta Alaeze Mesaya ngọzi.
The asaa bloodline si Adam
D et ike ịbụ na-akpali mmasị banyere n'ebe a bụ na Enoch bụ nke asaa bloodline si Adam. Assembly bụ otú ahụ nke asaa Assembly ga-apụta ná Mkpughe isi nke atọ
Anyị bi na Leodisia oge, nke, dabeere na a akụkọ ihe mere eme na a amụma usoro iheomume nke otu bụkwa ikpeazụ Itie Assembly tupu owuwe. Anyị na-adị ndụ na mmalite nke sjutusende afọ mgbe e kere eke, ebe Enoch e jidere elu dị ka nke asaa släktsled mgbe Adam.
R OT si aha Enoch pụtara ọzụzụ na-ezi ihe, nke na-eme anyị na-eche nke ozi Jizọs iwu ka ọgbakọ. - " Ya mere gaanụ mee na-eso ụzọ nke mba nile" (Matiu 28:19 )
Dị ka Hebrew omenala, dị ka bụ Enoch a mụrụ n'ụbọchị Pentikọst, bụ nke na-ahụ ụbọchị nke ọgbakọ a mụrụ ya. Hanoks ndụ na ya owuwe tupu iju mmiri ahụ bụ a doro anya atụ nke owuwe nke ọgbakọ.
Lot ama zọpụta gbalahụ oke iwe nke Chineke
1 Exodus 19:22 - "m ga-ịkwatu obodo unu na-ekwu nke. Ma ọsọ ọsọ Gbaga n'ebe ahụ, n'ihi na m nwere ike ime ihe ọ bụla ruo mgbe i na-e "
G ud nụrụ mkpu ákwá nke ndị Sọdọm na Gọmọra, na hụrụ oké mmehie chịrị obodo. Abraham bargained na Jehova abụghị ibibi obodo e nwere ndị ezi ala ezi omume iri n'obodo ukwu. Ma e nwere ndị bụghị ndị ezi omume iri n'obodo ma dị nnọọ a mfe - Lot.
N'agbanyeghị na ọ bụghị ihe na Onyenwe anyị, mere, ọ na-ebibi ma na-ama ikpe obodo n'ihi na nke ya onye na nke ha. Sọdọm na Gọmọra e doro ikpe Chineke na iwe, na Chineke ka ọ na-mmiri ọkụ na brimstone n'elu obodo. Ma Onyenwe anyị nwere ike na-amalite ya iwe ruo mgbe na Lot hapụrụ obodo na ndị dị mma na ha gbara agbata obi obodo nke Zoa.
Luk 17: 28-29 - N'otu ụzọ, ọ bụ ke n'ụbọchị Lọt: ha rie ha, ha ṅụọ ihe ọṅụṅụ, ha zụtara ha, ha na-ere, ha kụrụ, ma ụbọchị na Lot we si na Sọdọm Mmiri zoro ọkụ na brimstone si n'eluigwe ma bibie ha nile.
L ot E wepụrụ oge na ebe ikpe Chineke ga-abụ na ihe mgbu. Ndị mmụọ ozi bụ ndị e zigara napụta Lot ekwusa na ha nwere ike na-amalite ikpe nke Chineke tupu Lọt bụ nchebe. Lot bụ a foto ọgbakọ nke na-na-napụtara oge na ebe nke iwe na-abịa.
2 Pita 2: 7-9 - Ma ọ zọpụtara ezi omume bụ Lọt, bụ onye na-emekpa site ajọ dissolute ndụ.
P etrus na-akụzi banyere ikpe na-emetụta ihe nile ajọ omume, na-egosi anyị na Chineke adịghị ekpe ikpe ezi omume na ndị ajọ omume.
Daniel na ndị ikom atọ na n'oké ọkụ
H istorien banyere Daniel na ndị ikom atọ na n'oké ọkụ bụ otu n'ime akụkọ nke Old Testament na-egosi a doro anya na foto nke mkpagbu na n'ọdịnihu ẹkụre.
Eze Nebukadneza, nke bụ a doro anya atụ nke àmà na-egosi, tinyere elu a oyiyi ọlaedo na ndagwurugwu Dura ke Babylon. Rịba ama na ihe oyiyi bụ iri isii n'ịdị elu na kubit isii n'obosara, nke nwere ike iji ya tụnyere àmà na-egosi okwu bụ 666. Nebuchadnezzar ese onye ọ bụla daa ma na-efe a ogo awụ, ebe ya pụta maka ndị na-ekweghị ndị a tụbara ahụ n'oké ọkụ . Na-ere ọkụ ọkụ bụ ihe osise nke iwe Chineke na oké ahụhụ na mkpagbu. (Malachi 4: 1 - Le, ụbọchị na-abịa, ọ na-agbakwa ka a ọkụ.)
S adrak, Mishak, na Abednego jụrụ ịkpọ isiala ka Nebukadneza akpụrụ akpụ na, ha na-atụba n'oké ọkụ. Eze nyere n'iwu na ọkụ ga-ewe iwe dị ọkụ ugboro asaa hotter karịa gị na mgbe hụrụ ya na-adị, na e nwere a na foto nke izu okè okwu. Jehova zitere mmụọ ozi ya onye na-echebe Shedrak, Mishak na Abednego na-acha ọkụ ọkụ ọkụ, ha wee pụta na-enweghị ihe ọ bụla mebiri ma ọ bụ mmetụta nke ọkụ.
Ma, ọ usuu ajụjụ nke akụkọ a bụ ebe Daniel bụ ebe. Ndi enye otu n'ime ndị na-kpọ isi ikpere ka oyiyi? Gịnị mere e ji na ọ gaghị gara, na ihe mere e ji na ọ gaghị ẹsịn n'oké ọkụ. Anyị nwere ike ịdị pụtara ụfọdụ na Daniel na-adịghị kpọọrọ ikpere ka Nebukadneza akpụrụ akpụ na. Daniel e dị abụghị ebe onye ọ bụla ga-efe ihe oyiyi, ma ọ bụ na-ere ọkụ ọkụ nke na-ata ahụhụ. Chineke nwere "e ya pụọ."
The nkọwa na eze nwere ndị ikom ndị a na n'oké ọkụ bụ na e nwere ndị Juu atọ ndị ikom (Dan 3:12). The Juu atọ ndị ikom bụ a na foto nke hoputara Israel nke ga-echebe site mkpagbu, na Daniel, onye m hụrụ n'anya (Daniel 10:11) bụ foto ọgbakọ nke na-ga-echebe site mkpagbu.
Paul kụziri banyere owuwe
P aulus bụ onye mbụ n'ụwa ọkọnọ ozizi na mkpughe nke owuwe, banyere afọ 20 mgbe obe. Ruo na oge ọ bụ amaghị n'ihi na Jizọs akụzighị owuwe-eso ụzọ ya na oge ya. The owuwe nke ụka na tumadi kọwara na 1 Ndị Tesalonaịka 4:16 na 1 Ndị Kọrint 15:52.
Otu nke anya amaokwu gt na anyị nwere ike ikwu na ọgbakọ dị na si Isaiah 26: 19-21. Achọrọ m na-agbalị iji ihe anyị na-ahụ na Aịsaịa isi nke 26, na Paul na-akụzi banyere owuwe na 1 Ndị Tesalonaịka 4: 16-17 & 5: 9.
Aịsaịa kwuru na nwa ederede na Paul-acha uhie uhie.
J es 26:19 - Ma gị nwụrụ anwụ ga-adị ndụ; ha ga-ebili. (First ndị nwụrụ anwụ na Kraịst ga-ebili) Na na na na-abụ abụ, unu na-ebi n'ime ájá, n'ihi na igirigi gị bụ a igirigi nke ìhè, na ụwa ga-esi ndị nwụrụ anwụ. Bịa ndị m, na-aga n'ime gi ulo nile, emechi ụzọ n'azụ gị. (Mgbe ahụ anyị nke dị ndụ ma na-anọgide ga-ejide elu n'ígwé ojii ọnụ na ha izute Onyenwe anyị na ikuku) zobe onwe gị a obere oge, ruo mgbe iwe na-agafe. N'ihi na, le Jehova abịa si ya ebe-ata ndị bi n'ụwa n'ihi ajọ omume-ha. (N'ihi na Chineke adịghị inye anyị ka anyị na-ata ahụhụ iwe ma na-enweta nzọpụta site n'aka Onyenwe anyị Jizọs Kraịst)
Ọ bụkwa n'akụkụ na-ezo aka John 14: 2-3, bụ ebe Jizọs okwu banyere Nna ya n'ụlọ nwere ọtụtụ ụlọ, nakwa na ọ na-aga n'ebe ịkwadebe ebe maka anyị. The Assembly ga-anụ otu olu na Jọn nụrụ na Mkpughe: - "Gbagote n'ebe a," na anyị ga-akụkụ nke ebe Chineke kwadebeere anyị. Anyị ga-aga n'ime-ulo-ya, gbachie ụzọ n'azụ anyị. Mgbe o mere, Jehova ya n'ebe ahụhụ ndị bi n'ụwa n'ihi ajọ omume-ha - onye bụkwa iwe Chineke.
Nkwa a bụ banyere Ya anya nloghachi ebe Jehova na-abịa Israel na-ebe ha bụ. Ọ bụ a nkwa ndị chọọchị na ọ na-arahụ n'ụlọ Nna ya ka o kwadebe a ebe anyị na e nwere.
Na mmalite nke akwụkwọ Mkpughe, isi 4, anyị ezute ìgwè na anyị zutere n'ihu na Bible. Ọ mbụ atọ ndị amụma ndị ọzọ ka Jọn rụrụ a ọhụụ a hụrụ ocheeze Chineke, ma ọ dịghị nke na mbụ buru amụma ìgwè mmadụ a. Isaiah hụrụ ha na Isaiah n'Isi 6. Ezekiel ha ahụghị ha Ezekiel Isi 1 & 10, na Daniel hụrụ ha nwekwara adịghị n'Isi 7. Ọ bụ okenye 24 Echere m na nke ọdụ gburugburu ocheeze Chineke na Mkpughe 4: 4
Nke a ìgwè mmadụ si otú a na n'ebe ahụ tupu, ma ugbu a, mgbe ndị na asaa ụka na-anọchi anya ọgbakọ si a mere na amụma anya, anyị na-ahụ ha na heaven. Ha na-na ebe gburugburu ocheeze Chineke tupu Mkpagbu ga-enwe ha mmalite ná Mkpughe isi 6, ya mere, m kweere na ndị okenye 24 na-anọchi anya-ezute Kraist ụka na bụ na ọnọdụ tupu Mkpagbu ọkọkpọhi ya mmalite.
The okenye 24 ọdụ n'ocheeze dị ka ha na-achị achị. Ha na-anọdụ gburugburu ocheeze Chineke, ya mere, ha na-enyere na-enyere aka Jehova. Ha na-anọdụ ala otú ọrụ ha na-eme. Ha na-yi uwe na-acha ọcha dị ka ha na rättfärdigjorda. Ha uwe himation, nke bụ otu ihe dị ka ugw na Jizọs 'uwe. Ha na-eyi okpueze (Stephanos), ya mere ha bụ ndị eze. Ha na-akpọ ndị okenye bụ ndị dị njikere allusion n'ọgbakọ.
Mgbe sjungar ka ha na-abụ abụ na-song förlöstas na Mkpughe 5: 9-10:
" I kwesịrị ekwesị ịnara akwụkwọ mpịakọta na-emeghe akara ya, n'ihi na e gburu egbu, na ọbara gị na ị zụrụ ndị na Chineke (anyị) si n'ebo niile na asụsụ na ndị na mba. I mewo ka ha (anyị) na a eze ime (eze) na ndị nchụàjà Chineke anyị, ha na (anyị) ga-eze n'elu ụwa.
S ma ọ bụrụ na ọtụtụ ugboro, ederede na-adịghị ekwesị si sụgharịa odide mbụ ya. King James nwere, n'etiti nsụgharị ndị ọzọ nọdụ onye mbụ otutu kama. The okenye 24 mata onwe ha na gbapụtara Church, nke a na-eji ejiji ka ha, ndị nchụàjà na ndị eze dị ka ha, na na ọnọdụ tupu mkpagbu mmalite.
V na otú ahụ ofụri Bible ọtụtụ ihe atụ na-achọ ịdị na-egosi na Jehova ga-akpali ya n'ọgbakọ si ma a oge na ebe mgbe ọ na-abịa na njedebe oge ikpe ga-akwali ụwa.
Ọ ga-efopụ anyị ma zoo anyị na Nna ya n'ụlọ na-esote ya iwe mechaa site na. Anyị na-ekwe nkwa e chebe site na nke ga-agafe ụwa a ebe ọ bụ na nzube na isiokwu nke mkpagbu na abụghị maka ọgbakọ ahụ. Anyị na-adịghị na-eche àmà na-egosi ma maka gọziri agọzi olileanya nke Chineke ukwu anyị na Onye Nzọpụta Jesus Christ ga-egosi na ebube. (Titus 3: 4) Ọ na onye na-azọpụta anyị iwe na-abịa. (1 Nke 1:10)
D et a bụ nke atọ post m dee ka a na-azara ọnụ maka na Nga trib ozizi, ya bụ na Jizọs ga-ozi kpọtara ya n'ọgbakọ tupu aga n'ime 70 na nke ikpeazụ izu nke afọ, nakwa na mkpagbu ikpe na-aga n'elu ụwa.
A họọrọ ọgbọ
U ejikọ na ngosipụta nke Jizọs laghachiri mgbe masịrị m, na echiche nke a họọrọ, ọgbọ na akụkọ ụmụ mmadụ na-agaghị edetụ ọnwụ ire, ma kama ga-enweta ya gbanwee na-eme mgbe Jizọs bịara na-akpọkọta ya n'ọgbakọ site na-efopụ ha na ndu ka heaven.
Day nke mgbapụta na-eru nso
D et na-eme ka isiokwu adọrọ nnọọ mmasị na controversial, bụ na ihe ịrịba ama na-ekwu okwu nke ukwuu ike na anyị na-aga n'ebe a ga-eme n'ọdịnihu ẹkụre, ma si otú nloghachi nke Jesus.
Ọtụtụ ndị taa na-enwe ihe ịrịba ama na anyị nwere ike ma na-ahụ, na na Mmụọ Nsọ na-ekwu n'ụzọ doro anya na chọọchị nke Chineke na obi nke ndị mmadụ ga-esi njikere. Na na njikọ, mgbe ahụ ndị mmadụ na-amalite ịhụ na ụbọchị nke mgbapụta na-eru nso, ndị ọzọ ajụjụ bụ mgbe anyị pụrụ n'ezie ịtụ anya na uppryckelsens oge etịbe?
The ajụjụ ọtụtụ ịjụ
E n Ụfọdụ n'ime ajụjụ ndị na ọtụtụ ndị na-ajụ onwe ha na njikọ na nloghachi nke Jizọs bụ mgbe anyị nwere ike na-atụ anya na owuwe-adị? The Assembly ga-aga site na mkpagbu? Gịnị kpọmkwem bụ nzube nke mkpagbu, na ọ bụ n'ezie ndị àmà na-egosi ma ọ bụ Jizọs, anyị kwesịrị ichere maka? Bụ nloghachi nke Jizọs na owuwe nke otu ma ọ bụ abụọ dị iche iche ihe?
M olileanya na ma a post na ndị ikpeazụ m dere azịza ụfọdụ n'ime ajụjụ ndị.
My onye nkwenye
T reviously m mara mma kwenyesiri ike na Jizọs ga-akpa weghachite ya parish mgbe mkpagbu na owuwe na Jizọs anya nloghachi n'otu ihe ahụ. Jizọs na-ekwu naanị nke a laghachi, gịnị mere ọgbakọ-azọpụta site na mkpagbu mgbe ma Israel na ụwa a na-ata ahụhụ? M hụrụ na mkpagbu dị ka a dị mkpa ọcha usoro nke ahụ Kraịst n'ihi na nke n'efu anyị na-ahụ ọtụtụ ebe taa.
Ma mgbe m ná mmalite nwere ụfọdụ zaghị ajụjụ na apụghị m inwe mgbagwoju anya na ihe m nwere ike na-agụ na Bible, m na-agbalị itinye onwe m na ajụjụ kwesịrị ekwesị. Ndị a nnyefe bụ a n'ihi ihe m wee na.
Dị nnọọ ka n'aka ka m taa ka m nzọpụta, m nwekwara mgbe ọ na-abịa oge mgbe n'ihi na owuwe nke ọgbakọ. Jesus ga ịghọrọ ya n'ọgbakọ tupu urua afọ na 70 izu na-amalite, na m chọrọ ịkọrọ ụfọdụ nke arụmụka na m na-eche na-ekwu okwu nke ukwuu nke ya.
Owuwe na Jizọs anya nloghachi
John 14: 1-3 - Ka obi-unu ghara ilọ miri. Kwere na Chineke ma kwere na m. Na n'ụlọ Nna m nwere ọtụtụ ụlọ. Ọ bụrụ na ọ bụghị otú ahụ, m gaara gwara gị na m na-aga ịkwadebere unu ebe? Ma ọ bụrụ na m gaa kwadebe a unu ebe, m ga-abịa azụ na-ewe gị ka onwe m, ka unu wee na-ebe m
1 Ndị Tesalonaịka 4: 15-17 - anyị asị unu site n'okwu Jehova, na anyị nke dị ndụ ma na-anọgide na-abịa nke Onyenwe anyị ga-egbochi ha nọ n'ụra. N'ihi na mgbe a oké iwu, a olu onyeisi ndị mmụọ ozi na trump nke Chineke, Onyenwe anyị n'onwe ya ga-ịgbada heaven. Na naanị ndị nwụrụ anwụ na Kraịst ga-ebili. Mgbe ahụ anyị nke dị ndụ ma na-anọgide ga-ejide elu n'ígwé ojii ọnụ na ha izute Onyenwe anyị na ikuku. Na otú anyị ga-ebi na Onyenwe
U ppryckelsen na aha ọzọ adịghị Jizọs anya nloghachi. I nwere ike ịsị na nloghachi nke Jesus emee na nkebi na-amalite na owuwe na ọgwụgwụ Ya anya nloghachi mgbe oké mkpagbu.
Owuwe nke Assembly
U ppryckelsen bụ-adịghị ahụ anya ihe omume ahụ na-adị na-enweghị aka ná ntị. Anyị maara, ndị ọzọ okwu adịghị nnọọ ziri ezi mgbe ọ na-eme, na anyị na-gwara na-echenụ nche na ekpere. Anyị ga-ama ndị oge banyere owuwe na-enwe nghọta mgbe ọ na-amalite kpum, ma hour na oge anyị na-amaghị ihe ọ bụla banyere, ma ọ ga-ezo ruo ụbọchị ọ na-eme.
Jesus abịa gara ọkara ka Earth ibuso anyị ohere, na-ewere anyị laghachi n'eluigwe, ka anyị na-ebe ọ bụ. Ọ bụrụ na Jizọs wee na-Earth mgbe owuwe, otú ọ naara anyị ebe anyị na-kama. Ma dị ka Jọn, ọ na-abịa azụ ka anyị ebe ọ bụ, bụ onye nọ n'ụlọ Nna ya n'ime ya alaeze eluigwe.
Jesus anya nloghachi
J esu anya nloghachi nweghị-adịghị ahụ anya ma ọ bụ na nzuzo na-abịa. All anya ga-ahụ ya, ọ ga-n'ụzọ zuru ezu anya na n'ígwé ojii nke eluigwe. The oge nke ụbọchị bụkwa ọ na anya, mgbe ahụ, anyị maara na ọ ga-ozugbo ọgwụgwụ nke mkpagbu, ma ọ bụ nanị 3.5 afọ mgbe nnukwu nsogbu n'oge.
Mmadụ ole na ole na-adị ndụ mkpagbu ga-enwe ike na-agba àmà ihe omume a.
Dị ka Jehova n'onwe ya kwuru
P aulus na-emesi na ọ bụ "site n'okwu Jehova " mgbe ọ na-akụzi banyere owuwe na mbilite n'ọnwụ.
Nke mbụ, ọ bụ 1 Ndị Tesalonaịka e dere site Paul banyere AD 51, ma eleghị anya ọ bụghị Oziọma ma dere n'oge mgbe mgbe Pọl degaara akwụkwọ ozi a. Nke abụọ, ị ga-enweghị ozizi Jizọs n'Oziọma ebe Jizọs na-ekwu nke ụfọdụ na-ebilite n'ọnwụ, ka ndị ọzọ na-abịa ndụ tụgharịa na-eche ihu ya na ígwé ojii.
Jizọs kwusara naanị mbilite n'ọnwụ nke ndị nwụrụ anwụ, nke dabeere na nkwa anyị nwere ike ịhụ na OT. E nwere, dị nsọ kwere nkwa mbilite n'ọnwụ ozugbo mgbe oké mkpagbu (Daniel 12: 2), na dị nnọọ tupu Millennium. Ọ bụ nke a na mbilite n'ọnwụ Jizọs kpọrọ ndụ ma ọ bụ mbilite n'ọnwụ nke si otú bụ nke Saints GT.
1 Kọrint 15: 51-52 - Lee, m na-agwa gị ihe omimi: Anyị ga bụghị ihe niile na-ehi ụra, ma anyị niile ga-agbanwe, Na a oge, na ntabi anya, na-afụ opi ikpeazụ. N'ihi na opi ga-ajụta na ndị nwụrụ anwụ ga-akpọlitekwa apụghị ire ure, anyị ga-agbanwe.
D et pụtara na Paul-enye otu n'ime ihe nzuzo na udiozi na ọgbakọ na-eme, dị ka ọ nọwo na site na a kpọmkwem okwu ma ọ na mkpughe nke Onyenwe anyị.
The nzuzo na Paul-egosi a na na mgbe e kpugheere ma ọ mara, ọ bụ nnọọ na a họpụtara ọgbọ ga-anwụ, kama ga-enweta ọ ga-gbanwee ma nwoghara, a ga-ejide elu ọnụ na ndị nwụrụ anwụ iji izute Jesus ke eluigwe.
Anyị chọrọ ịbụ ebe ọ bụ
John 14: 1-3 - "Ka obi-unu ghara ilọ miri. Kwere na Chineke ma kwere na m. Na n'ụlọ Nna m nwere ọtụtụ ụlọ. Ọ bụrụ na ọ bụghị otú ahụ, m gaara gwara gị na m na-aga idoziri n'ihi unu? ma ọ bụrụ na m gaa kwadebe a unu ebe, m ga-abịa azụ na-ewe gị ka onwe m, ka unu wee na-ebe m. na n'ebe ọ bụla m na-aga, ị maara na. ụzọ ị maara. "
Na n'Oziọma Jọn, Jizọs na-enye anyị a pụrụ iche echiche. Ọ na-ekwu okwu banyere ihe na ọ dịghị onye amụma nwere na mbụ ma ọ bụ ndidi ekwe. Ọ dịghị ebe anyị na-agụ na Mesaya ga-abịa, ma kama kpọkọta Saints n'ụwa Jerusalem, ọ ga-ha ka ha n'ụlọ Nna ya, nke bụ otu ihe ahụ n'ebe ọ ga-pụọ.
Mgbe ọ na-enye nkwa ahụ, ọ bụ ihe na-adabere na " m ga-azụ ma na-ewe gị ka onwe m, ka unu wee na-ebe m." Ọ na-ekwu banyere a comeback, ọ bụghị ya na ndị Juu ntọhapụ ime, ma ọ bụ na iru alaeze ya n'ụwa, ma ọ bụ na-ekpe ikpe mba nile. Ọ bụ a okwu na naanị ya aka ha mee.
John 14: 1-3 na 1 Nke 4: 13-18
D ebe a na-ịtụnanya aghota mgbe anyị na-atụnyere ndị a amaokwu abụọ ebe ụfọdụ nke okwu ma ọ bụ nkebi ahịrịokwu ndị fọrọ nke nta ka yiri. Ha na-agbaso onye ọ bụla ọzọ na n'otu oge ahụ, na iji ha na-abịa, na n'ụzọ na ibe na-wuru.
John 14: 1-3 1 Nke 4: 13-18
v.1 nchegbu v.13 pine
Kwere v.1 v.14 Ị
v.1 Chineke, m v.14 Jesus, Chineke
v.2 gwara gị v.15 agwa gị
v.3 abịa azụ v.15 ọbịbịa nke Onyenwe anyị
v.3 were gị V.17 naara elu
v.3 m V.17 izute Onyenwe
v.3-ebe m V.17 enwe mgbe nile na Jehova.
Ma ndị a na amaokwu na-akasi obi ma na-egosi anyị na a pụrụ iche n'ụzọ na Jehova na-abịa na-ekwe si n'ụwa ebube nke eluigwe.
18 Nga trib argumenter
1. Ọ dịghị nnọọ amaokwu na Old Testament ma ọ bụ na New Testament na-egosi na chọọchị ga-aga site na mkpagbu oge, ma ọ bụ na chọọchị ga-eguzo ihu na ihu megide àmà na-egosi.
2. Mkpagbu a na-akpọ "Jekọb nsogbu" (Jer30: 7), ma na-dịghị mgbe a na-akpọ "n'ọgbakọ ma ọ bụ na chọọchị nsogbu".
3. Angel Gabriel kwusara ka Daniel na 70 izu kpebisiri n'aru ndi-gi (Juu) na n'elu gi n'obodo nsọ (Jerusalem). The ụka na-adịghị kwuru ebe a. Dan 9:24
4. The Assembly enweghị òkè na ndị mbụ 69 izu, na agaghị abụ akụkụ nke ikpeazụ na 70 izu.
5. Na Mkpughe owuwe emee n'Isi nke 4: 1 nke bụ mkpagbu nke oge a kọwara n'Isi nke 6-19. The okenye 24 na-anọchi anya ọgbakọ ahụ si na ebe n'ihu mbụ akara na-agbajikwa.
6. The Assembly kwuru iri abụọ ugboro atọ ndị mbụ isi Mkpughe, ma mgbe e kwuru okwu n'etiti isi nke 4 na 19.
7. The oge oke mkpagbu a na-akpọ a "ụbọchị iwe" (Zef 1:15) na Bible, ma Jizọs ekweghị inye anyị na-ata ahụhụ iwe. (1 Nke 5: 9), kama nyefee anyị n'aka "iwe" (1 Nke 1:10)
8. Mkpagbu oge na-akpọ Day nke Onyenwe anyị na Bible (Zef 1:15). Ma 1 Tesalọnaika 5: 2-3 na-ekwu na ụbọchị nke Onyenwe anyị (mkpagbu) ga-abịa dị ka onye ohi n'abalị. Mgbe ndị mmadụ (na-ekweghị ekwe) sị, "Udo na ntụkwasịobi," mgbe ahụ see (ekweghị ekwe) na mbibi dị ka mberede dị ka ihe mgbu na-abịa gafee nwanyị dị ime, na ha (nke na-ekweghị ekwe) agaghị agbanahụ. O doro anya na mkpagbu ahụ na ihe ga-adakwasị ndị disbelievers, ma, ọ na-agụnye ndị kwesịrị ntụkwasị obi na-azọpụta.
9. Anyị ga-agụgụkwa ọ bụla ọzọ na-ekwu okwu nke owuwe (1 Ndị Tesalonaịka 4:18). E nweghị obi na-ezi na-ekwu na chọọchị ga-aga site na akụkụ ma ọ niile mkpagbu domstid.
10. Jizọs kwere nkwa ndị chọọchị na Philadelphia na ya chọrọ iji chebe ya na chọọchị, "napụta gị nke hour ọnwụnwa, nke ga-abịakwasị ụwa dum ma na-ewetara ya ka ndị mmadụ ule." (Mkpu 3:10) Chineke kwere nkwa iji chebe kwesịrị ntụkwasị obi ọgbakọ nke mkpagbu nke oge.
11. Dị nnọọ ka Enoch e jidere elu-igwe tupu iju mmiri na Noa chebere site Iju Mmiri ahụ, Assembly ga-ezute Kraist tupu mkpagbu na Israel mmapụta-echebe mkpagbu.
12. N'otu ụzọ na Chineke enweghị ike ikpe Sọdọm na Gọmọra tupu Lọt bụ n'obodo ahụ, Chineke nwere ike ekpe ikpe nke ụwa a n'ihu ndị ezi omume na-arahụ. (1 Gen. 19:16)
13. Jizọs kwuru nke mkpagbu nke oge mgbe ọ jụrụ, sị: "Vaka mgbe niile na-ekpe ekpere maka ike ịgbapụ ihe niile na-abịa na-eguzo n'ihu Nwa nke mmadụ." (Luke 21:36) Ọ na-eme ka mba uche na Jizọs jụrụ maka ihe ọ bụ na-adịghị njikere na-.
14. Malakaị 3:18 na-ekwu, Chineke (na mbata) ga-egosi anyị ihe dị iche n'etiti onye ezi omume na onye ajọ omume, n'etiti onye na-ejere Chineke ozi na-adịghị ejere ya. Nga trib kwere na Jehova na-abịa na-akpọkọta ya n'ọgbakọ, mgbe ahụ, anyị na-abịa na ya na-ekpe ikpe n'etiti onye ezi omume na ndị ajọ omume.
15. Mgbe owuwe, Jizọs na-abịa maka Ya ụka (1 Ndị Tesalonaịka 4: 16-17) mgbe ọ na-abịa na njedebe nke mkpagbu, ọ ga-abịa na ya n'ọgbakọ. (1 Nke 3:13).
16. akwụkwọ ozi asaa ụka na gwara Jizọs ka "ịnụ ihe Mọ Nsọ na-ekwu na ọgbakọ." Ma na oké mkpagbu ahụ, mgbe na Mmụọ Nsọ na chọọchị bụ n'akụkụ ọdụ, ọ na-ekwu, sị: "Onye nwere ntị, ya nụrụ" (Mkpughe 13: 9) Ọ omits ndị Assembly, ebe e nweghị ụka na-ege ntị na Mmụọ na-ekwu na na-aga site na mkpagbu.
17. àmà na-egosi ga-eme ka agha na ndị nsọ, na-enwe ike imeri ha. (Mkpu 13: 7). Ma, ọ pụghị ịbụ township kwuru ebe a. Jizọs n'onwe ya kwere nkwa na "helvets ọdụ ụgbọ mmiri ga-adị ka ọgbakọ nke ndị dike." (Matthew 16:18)
18. Jizọs ekwughị: "Mgbe nke a mere," mgbe ahụ agbatịnụ na ebuli gị isi, kama "Mgbe a nile (ihe ịrịba ama) amalite ime," otú agbatịnụ na ebuli gị isi, n'ihi na gị mgbapụta. (Luke 21:28).
Of àmà abụọ
S ugwu m na-ahọrọ akụkụ Akwụkwọ Nsọ abụọ, ndị GT na NT, na-ekwu okwu ọnụ, na-agba akaebe na chọọchị ga-aga site na oke iwe nke Chineke, ma ọ bụ mkpagbu, na m chọrọ tụọ abụọ na Vasi ndia:
1 Ndị Tesalonaịka 1: 9-10 - The ha na-ekwu banyere otú anyị natara nke gị na otú ị tụgharịa Chineke si arụsị na-eje ozi ndị dị ndụ na ezi Chineke na-eche ya ka Ọkpara ya si n'eluigwe, Chineke kpọlitere n'ọnwụ, Jesus onye napụtara anyị iwe na-abịa
Isaiah 26: 19-21 - Ma gị nwụrụ anwụ ga-adị ndụ; ha ga-ebili. Kulie na-abụ abụ, unu na-ebi n'ime ájá, n'ihi na igirigi gị bụ a igirigi nke ìhè, na ụwa ga-esi ndị nwụrụ anwụ. Bịa ndị m, na-aga n'ime gi ulo nile, emechi ụzọ n'azụ gị. Zobe onwe gị a nwa oge ruo mgbe iwe na-agafe. N'ihi na, le, Jehova na-abịa n'ime ya ebe-ata ndị bi n'ụwa n'ihi ajọ omume-ha. Ụwa ga-kpugheere ọbara ha ụgwọ na-adịkwaghị zoo ha egbu.
V na-apụghị ịhụ na ihe odide a si Isaiah mgbe ọ bụla e mezuru. Ọ na-ekweta na mbilite n'ọnwụ ahụ Jizọs kwusara na Daniel na-agwa Dan 12: 2, nke anyị maara ga-eme mgbe Mkpagbu na bụghị tupu.
Ebe a Aịsaịa na-ekwu kama a mbilite n'ọnwụ na-adị mgbe Chineke mbụ a na-akpọ ha ndị ha na-ulo n'ihu na n'ihu na ọnụma Chineke na ikpe na-aga n'elu ụwa.
Bịa ndị m,
"K banyere ndị m," nke pụtara n'ezie "ofufe" ma ọ bụ "na-adịghị ahụ anya", bụ ihe ịtụnanya yiri ahụmahụ nke Jọn ná Mkpughe isi 4, bụ ebe ọ hụrụ ihe na-emeghe ụzọ na heaven, na n'otu oge ahụ nụrụ olu Chineke ka a opi n'otu aka ahụ, sị: "Bịa n'ebe a." Kama Chineke, oyi na-atụ na-aghọ John ejide ocheeze Chineke, ebe o si heaven le mkpagbu egwuri si n'ụwa.
John na-anọchite anya nke a na chọọchị na ga-ahụ ndị na-uppryckelsens ụbọchị. Site a iwu, a olu onyeisi ndị mmụọ ozi na trump nke Chineke, ọgbakọ ga-ejide elu n'ime eluigwe ma ga-ahụ mkpagbu n'af n'ụwa.
Iji na-agbalị na-ata ndị bi n'ụwa
Mkpughe 3:10 - N'ihi na unu na-edebe okwu m banyere ntachi obi, m ga na-ị na-azọpụta gị si hour ọnwụnwa, nke ga-abịakwasị ụwa dum ma na-ewetara ya ka ndị mmadụ ule
J esaja-ekwu na nke "Jehova na-abịa si ya ebe-ata ndị bi n'ụwa n'ihi ajọ omume-ha." N'otu aka ahụ na-akwado Mkpughe 3:10 na oge awa nke ọnwụnwa (mkpagbu), nke ga-abịakwasị ụwa nile bụ itinye ya ndị mmadụ ule.
Ma Aịsaịa na Mkpughe okwu banyere nzube nke Mkpagbu bụ iji taa na-agbalị na-bi n'ụwa n'ihi na ha mmehie ha site ihe na-akpọ iwe Chineke. Otu iwe na ma amaokwu ndị a na-agba akaebe na anyị na-azọpụta site na, site na Chineke kpọrọ anyị ka anyị n'ụlọ ya n'ụlọ Nna, n'ụlọ-ulo-ya ruo mgbe iwe na-agafe.
A nwoke na a desert agwaetiti
O m na anyị nwere ike ime ihe nnwale na-etinye a nwoke na a desert agwaetiti, na na a Bible n'aka-ya, ma expositions na akwanye ozizi echiche. Olee ihe o ji bịa ka ọgwụgwụ na-akwanyere ndị oge mgbe n'ihi na owuwe?
Akpa, ọ mụtara site n'aka Aịsaịa 13: 9-13, na Amos 5:18 na Chineke ga-ikpe uwa ikpe n'ihi mmehie ha site n'ịwụfu ya iwe site na a egwu domstid dị ka Bible na-akọwa dị ka Day Jehova.
Aịsaịa 13: 9-13 - Le, ụbọchị nke Jehova abịa, egwu, na ọnụma na iwe di ọku, dina ala n'iyi ihe ala na ndi-nmehie-ebi n'ebe ahụ. N'ihi na kpakpando nke eluigwe na ìgwè kpakpando adịghị ụgbọ mmiri ọzọ ya ìhè. The anyanwụ adahade ọchịchịrị, ọnwa nke na-ìhè adịghị on. M ga-elebara ụwa maka ihe ọjọọ ya, ajọ omume-ha leta. M ga-eme ka stoltas àna m anwụ anwụ na kụtuo maa jijiji mpako. M ga-eme ka a nwoke ọzọ obere karịa edo ọma, a nwoke ọzọ obere karịa ọlaedo ọma nke Ofia. Ya mere, m ga-eme ka eluigwe na-ama jijiji, na ụwa na achịkwa na ịma jijiji na ntọala ya -e sitewo Jehova nke usu nile nke ndi iwe n'obi, ya dị ọkụ iwe.
Amos 5:18 - Ahụhụ ga-adịrị ndị na-atụsi anya ike ụbọchị Jehova! Gịnị mere na ị na-enwe agụụ maka ya? Day nke Jehova bu ọchichiri, ọ bughi ìhè.
G eNom na mgbe na-agụ na na Matiu isi 24, o nwere ike ịhụ na ikpe oge ga-abụ obere ihe na ọ gwụla ma Jehova kwubiri na ọ ga-ọ dịghị mmadụ ọ lanarị. Kama nke ahụ, Jehova ga-agbacha ọsọ a domstid site n'ike na ebube azụ n'ụwa nke a. Mgbe ọ maara na Jizọs laghachiri mebeghị, ma, ya mere, ọ maara na iwe Chineke ka ebe na-eme n'ọdịnihu.
Mgbe ọ bịara 1 Thess 9-10 ya mere o nwere ike ịhụ a mara doro anya na nkwupụta. Ọ na-agụ banyere Jizọs onye na-azọpụta anyị na napụtara anyị iwe na-abịa.
1 Ndị Tesalonaịka 1: 9-10 - The ha na-ekwu banyere otú anyị natara nke gị na otú ị tụgharịa Chineke si arụsị na-eje ozi ndị dị ndụ na ezi Chineke na-eche ya ka Ọkpara ya si n'eluigwe, Chineke kpọlitere n'ọnwụ, Jesus onye napụtara anyị iwe na-abịa.
English translation (NIV): ..and na-eche maka Ọkpara ya si n'eluigwe, Onye ọ kpọlitere ndị nwụrụ anwụ - Jizọs, bụ onye na-anapụta anyị nke na-abịa iwe.
G eNom na-agụ amaokwu Baịbụl ọ zaa ajụjụ ndị "onye, ihe, ebe, mgbe na ihe mere." Ònye (Jesus) Gịnị (onye na-anapụta ma na-azọpụta anyị), mgbe (oge nke ọnụma). Site n'ịgụ n'ihu na 1 Ndị Tesalonaịka 4: 15-17, o nwere ike na-agụ na "onye ọ bụla" nke si n'ụwa na n'ígwé ojii nke eluigwe, na 1 Ndị Tesalonaịka 5: 9 jụrụ mere egosigwara mgbe anyị na-agụ na-echekwa anyị ihu-ata ahụhụ oké iwe Chineke, kama inweta nzọputa site n'aka Jizọs Kraịst.
1 Ndị Tesalonaịka 5: 9 - N'ihi na Chineke adịghị inye anyị ka anyị na-ata ahụhụ iwe ma na-enweta nzọpụta site n'aka Onyenwe anyị Jizọs Kraịst
English translation (Mb): N'ihi na Chineke emeghi họpụtara anyị iwe, kama inweta nzọputa site Onyenwe anyị Jizọs Kraịst
V Ua atụ pụrụ ịhụ na, na na anyị na-azọpụta banyere otu oge-ebe nke oké iwe Chineke dị ka anyị bụ bụghị ụfọdụ nke ahụ, o nwere ike mere ikwubi na owuwe ga kama na-anọchi anya ya. Owuwe ga alltstå ịkpalite iwe nke Chineke n'elu ụwa onye ịmalite na Mkpughe isi 6.
Azịza ugboro ugboro jụrụ ajụjụ post-trib
M i mgbe nile ga-arụmụka na ajụjụ si n'etiti ndị na-ekweghị na a owuwe tupu mkpagbu. Lee ụfọdụ n'ime ihe ha:
"The Bible adịghị akụzi na a ga-abụọ advents. Olee otú ị pụrụ ikwu na Jizọs ga-abịa ugboro abụọ? "
Azịza: Dị nnọọ ka ọ na n'otu ụzọ ahụ, e nwere ihe abụọ dị iche iche foto nke Messiah na Old Testament (ahụhụ orù na King), e nwere ihe abụọ dị iche iche foto nke Jizọs laghachiri siri ike nnọkọ. Abụọ ndị a usoro na-owuwe na Jizọs anya nloghachi. I nwere ike na-ekwu na Jizọs laghachiri na-eme na nkebi ebe owuwe-amalite, na Jizọs 'anya nloghachi akwụsị ya. Ọ bụ nanị kpamkpam dị iche iche ebe ọ bụ ihe.
"Jizọs kwuru na owuwe ga-ebe Ozugbo mkpagbu (Matthew 24: 29-31) mgbe ọ na-eziga ndị mmụọ ozi na-akpọkọta ndị ya ọ họpụtara omume."
Azịza: Owuwe adịghị ime na Matiu isi 24 n'ihi ọtụtụ ihe:
Na owuwe ga kwere ekwe ebube ha ahụ na-eme ka anyị dị nnọọ ka Jizọs na ndị Ascension ọkụ nwere ike ime ya na-enweghị enyemaka nke ndị mmụọ ozi. Gịnị mere anyị chọrọ enyemaka nke ndị mmụọ ozi na owuwe, mgbe anyị na-tụgharịa ebube nke aru nke?
Ndị mmụọ ozi na-achịkọta ọnụ orättfärdia n'oge a mgbe (Matiu 13: 38-43, 49-50)
Ọ bụrụ na onye na-ekwu na ndị mmụọ ozi na-achịkọta ndị kwere ekwe na Matthew 24 na-upprycklsen ga Matt 13 otú ahụkwa-ahụ. Na Matiu 13, anyị na-ahụ n'otu oge ahụ na ọ bụ onye ajọ omume ga-agbajikwa n'ebe Earth mbụ na bụghị ndị ezi omume.
Ndị mmụọ ozi na-zitere chikọta ma ndị ezi omume ma ndị ajọ omume na-ekpe ikpe site Jizọs tupu 1000 afọ alaeze. Ndị a ndị na-na ha eke ozu, ebe ndị ajọ omume na-na-ajụ n'ime ọdọ ọkụ, mgbe ndị ezi omume na-ekwe til eketa 1000 afọ alaeze.
Nloghachi nke Jesus ke Matthew 24
Matthew 24:31 - na oké opi oku, ọ ga-eziga-eziga ndị mmụọ ozi ya, ha ga-akpọkọta ya arọputara si anọ bụ isi ihe, site n'otu nsọtụ eluigwe ruo na ọzọ.
M na 24 bụ a isi na-akọwa na Jizọs anya bịa Israel na ụwa. Na ikpe ndị iro ya, na igosi Mesaya alaeze. Ọtụtụ mgbe na-atụ aka họrọ N'amaokwu 31, nke ọ na-ekwu bụ ọgbakọ ya. Echere m na ọ bụ nnọọ ihe doro anya na ọ na-hoputara Juu ngalaba bụ banyere.
Gbalịa ọbụna mee ka ndị na-esonụ amaokwu mmekọrita Matiu 24:31:
Aịsaịa 11:11 - Jehova ga-abụ n'oge ahụ otu ugboro ọzọ etinye aka ya, iji nweta onwe ha ndị fọdụrụ nke ndị ya , ihe na-anapụta n'aka Asiria, Egypt, Patros, Ethiopia, Ilam, Shaịna, Hemat, na agwe-etiti .
Isaiah 11: 12 Ọ ga-azụ a ọkọlọtọ n'ihi na mba nile na-akpọkọta ndị a jụrụ ajụ nke Israel na chụgara Juda si n'akụkụ anọ.
Banner na opi
B Anner na opi ihe atụ nke ọkpụkpọ elu nke ndị mmadụ. E nwere doro anya otu riri ha na-ekwu banyere ya, na Chineke na-ekwuputa site Isaiah na ọ bụ Izrel ndị ikom na ndị inyom bụ ndị na-kpọ. The hoputara ndị Juu kwesịrị ntụkwasị obi na-anwụghị Mkpagbu, na na n'oge ahụ, na-agbasasịkwa niile n'elu ụwa. All Juu na-aga n'ụlọ, bụ nke na-na zuru kwekọrọ GTS okwu amụma. Ọ bụ na-egosi na ọ na-adịghị ekwu okwu banyere ụka ke Itie.
"Nga trib na ẹkenam site na ụfọdụ ndị na-atụ egwu na-aga site mkpagbu"
Azịza: Mgbe anyị na-ekwu banyere ahụhụ anyị ga-amalite site ịmata ihe dị iche izugbe ahụhụ anyị na-ezute na ụwa (gr.thlipsis) na ahụhụ anyị na-ezute na oké mkpagbu (gr.Thlipsis Megas) na Jizọs na-ekwu nke na Matiu 24, na Daniel Chapter 12
Nga trib ozizi a adịghị aga na na kwere ekwe ga-agbanahụ mkpagbu. Jizọs buru amụma na anyị ga-asị na-na ụwa a n'ihi ya (Jọn 15:18). Na ụwa, ezi ndị kwere ekwe ga-enweta a agha ime mmụọ megide principalities na ike, anụ ahụ onwe ha, na-ata ahụhụ maka ozioma. Ụdị nhụjuanya, Jizọs mgbe kwere anyị na anyị ga-free si. The iwe anyị na-ezute na mkpagbu ahụ na ihe dị iche iche na ihe na okwu kwere nkwa anyị na anyị ekwesịghị-enweta ma ọ bụ na-aga site. (1 Nke 5: 8)
"Pọl na-ekwu na 2 Ndị Tesalonaịka 2: 1-9 na owuwe mesoghị tupu-emegide Kraịst na-egosi"
Zaa: Paul na-ekwu okwu nke owuwe na ikwu na ụbọchị Jehova, a na-adịghị enstydig Jesus 'anya nloghachi. Day nke Onyenwe anyị abụghị otu ụbọchị na betydningen nke awa 24, kama a oge nke ikpe nke na-aga n'ime ụwa. (As 2:12, 13: 6, Ezekiel 13: 5, Joel 1:15 Amos 5: 18,20)
The chọọchị na Thessalonica tua egwu na-echegbu onwe unu na ha na-ama hụrụ onwe ha n'ime mkpagbu nke oge. Paul emesi ha obi ike na-agwa ndị àmà na-egosi ga-akpa-ekpughe tupu ya emee. Mgbe àmà na-egosi na-amalite ọgbụgba ndụ ya na Israel amalite ikpeazụ izu nke afọ, ma ọ bụ mkpagbu.
Olee otú ndị mmadụ ga-azoputa na mkpagbu nke Mmụọ Nsọ na-arahụ site n'ụwa?
Azịza: Nke Mmụọ Nsọ bụ n'akụkụ ọdụ apụtaghị na-ekwe omume nke nzọpụta agaghịzi adị, ma na Mmụọ Nsọ ga-ebi n'ime obi ụmụ mmadụ ebe anyị nwere Mmụọ Nsọ dị ka a akara bụ nnọọ pụrụ iche maka ọgbọ ụka.
Tupu mwụpụ nke mmụọ nsọ na Pentikọst na-ndị mmadụ na-azọpụta, na Mmụọ Nsọ pụtara n'ihu ndị. Mgbe a wụkwasịrị Mmụọ Nsọ na Pentikọst, anyị abụghị ndị a "nke abụọ" Mmụọ Nsọ na ụwa. Dị nnọọ ka na Old Testament, ndị mmadụ ga-azọpụta n'oge mkpagbu nke Mmụọ Nsọ ga-arụ ọrụ ahụ n'otu ụzọ ahụ dị ka na OT, na isi site n'elu.
Ajụjụ na Post-trib ozizi
S amtidigt e nwekwara ụfọdụ na-azaghị ajụjụ na Post-trib ozizi siri ike zaa ma ọ bụ nye a kwesịrị ekwesị nkọwa nke:
Ọ bụrụ na owuwe-abịa mbụ Jizọs anya bịa, onye nke ga-ha jupụta Millennium?
"Ọ bụrụ na ị na-eche na dị nnọọ zọpụta enweta akụkụ nke Millennium, na owuwe-abịa mbụ Jizọs anya mgbe kwesịrị ụkpụrụ niile ndị mmadụ na Millennium na emewo ruo ebighị ebi ozu. Ma onye nke ga-ha jupụta Millennium, mgbe amụba nwere ike na-eme ndị mmadụ na-eke ozu "?
Azịza: Ọ bụ mere ndị a zọpụtara mgbe owuwe n'oge mkpagbu. Ndị ikom na-aga n'ime Narị Afọ Iri ahụ na ha eke ozu.
Gịnị mere e ji na owuwe na-adịghị kwuru na Mkpughe 19: 11-23 ma ọ bụ Ihe Chapter 14?
"Ke Ediyarade ibuot 19, anyị na-enweta a nkọwa nke Jesus 'anya nloghachi, kama o kwuru okwu banyere ma a mbilite n'ọnwụ ma ọ bụ owuwe. Zekaraya 14: 1-7 na-akọwa ihe a merenụ, ma ọ bụghị ebe ọ na-kwuru. Ọ bụghị ya ihe ijuanya na otu n'ime akụkọ ihe mere eme kasị ukwuu ihe omume nke na-agụnye a na mbilite n'ọnwụ nke otu narị otu narị nde mmadụ adịghị kwuru ma ná Mkpughe isi 19 ma ọ bụ Ihe Chapter 14? N'ihi gịnị? "
Azịza: Owuwe ma ọ bụ mbilite n'ọnwụ bụ kwuru n'ihi na ọ na nanị na-adịghị mere n'oge na-ekwu.
Ònye ga-anakọtara na mbụ,-ezighị ezi (Matiu 13: 30,41,49) ma ọ bụ ndị ezi omume? (1 Thess 4: 16-17)
Ma 1 Ndị Tesalonaịka na Matiu 13 na-ekwu na nwoke na mbilite n'ọnwụ na-ewere ọnọdụ mbụ. 1 Ndị Tesalonaịka agwa uppståendelsen nke ọgbakọ na-abịa mbụ, ma Matt 13 hụrụ na mbụ ndị ajọ omume e si n'ụwa. Ma iche iche nwere ike ghara ịbụ onye mbụ ga-ewepụ ụbọchị?
Azịza: E nwere ihe abụọ dị iche iche ihe ndị na-nanị adịghị n'out oge .
Eziokwu ahụ bụ na zọpụta ga-utịp na okpueze na owuwe (Kraist ikpe) Olee otú ọ bụ na ndị okenye 24 na-ama nwere ha (Mkpughe 4: 4-10), ọbụna ma ọ bụrụ na owuwe werewooro ọnọdụ?
Azịza: Owuwe ga nwere itie n'ihu mbụ akara na-agbajikwa.
Gịnị mere atụrụ na ewu na-iche mgbe mkpagbu nke ndị na-ama a na owuwe? (Matthew 25: 31-33)
Azịza: Na owuwe mesoghị Jizọs anya nloghachi, otú atụrụ na ewu (ndụ ndị na mkpagbu) iche tupu Millennium.
Ebe niile ga-ahụ "na-azoputaghi" si na na na njedebe nke Millennium? (Mkpu 20: 7-10)
Azịza: E nwere ndị bụ ndị a mụụrụ n'oge Millennium. Ha bụ mkpụrụ nke banyere ndị na Millennium na ha eke ozu.
Ọ bụ onye na-ejide azụ otú àmà na-egosi ike na-abịa n'ihu?
Azịza: Mmụọ Nsọ na chọọchị bụ nnukwu ihe mgbochi na-emegide Kraịst nwere ike ghara-abịa n'ihu.
Jizọs kwere nkwa na Jọn 14: 1-3 na ọ ga-idoziri kwere ekwe heaven, wee laghachi na-anyị ebe ọ bụ. Nga trib na-ekwu na Jizọs ga-alọghachi ụwa na-ahụ na ya n'ọgbakọ. Gịnị mere Jizọs ga idoziri anyị n'eluigwe ma ghara iri anyị ahụ?
Azịza: Post-trib ozizi bụ nnọọ ike ịkọwa John 14: 1-3
Jesus 'mkpọsa na Nazareth
Luke 4: 18-19 - "Mo nke Onyenwe ayi dị n'ahụ m, n'ihi na o tere m mmanụ na-ekwusa ozi ọma ndị ogbenye. O zitewo m ịkpọsa ọhịha gwa ndị a dọtara n'agha na ọhụhụ ụzọ nye ndị ìsì, na-enye emegbu emegbu nnwere onwe na-ekwusa na-anabata afọ Jehova
E soro Jizọs nwara ya n'ọzara, ọ bịara Nazaret, bụ ebe ọ na-agụ site na Isaiah 61: 1-2 na-ekwusa na okwu ndị a mezuru. The ihe na-achọpụta bụ na Jizọs na-akwụsị ufọt ufọt ikpe enweghị emecha dum amụma nke Aịsaịa.
Ihe mere Jizọs ji na-akwụsị n'etiti amaokwu bụ na akụkụ mbụ nke amaokwu a kemgbe na ya mbụ na-abịa na ozi elu ala ya na-eme. The akụkụ nke abụọ nke amụma ga na-agwụ agwụ mgbe chọọchị na-arahụ site n'ụwa.
Israel na Church
Ọrụ 15: 13-18 - "Brothers, gee m ntị. Simeon ka a kọwara otú Chineke mbụ mere n'aka o meriri a ndị maka aha ya n'etiti mba nile. Ọ bụ agbanwe agbanwe na Okwu ndị amụma, nke sịrị: Mgbe ahụ m ga-atụgharị azụ ma wughachi Devid dara obibi. ya mkpọmkpọ ebe m ga-ewughachi, m ga-ịtọ ya,
D et ndị ọzọ na nkà mmụta okpukpe ihe mere na chọọchị ga-ezute Kraist na nke 70 na nke ikpeazụ izu nke afọ.
Ọ bụrụ na ndị isi na-akpata maka 70 izu bụ mezue isii nkwa Israel anyị na-ahụ na Daniel 9:24, ọgbakọ ahụ na-arahụ tupu mgbe ahụ. Jacob na-agba akaebe na Ọrụ 15, sequentially mgbe Assembly oge n'ụwa, Chineke ga-eme ka ya na-elekwasị anya na-anọgide na ya omume na Israel. Owuwe ga-eme na a iche iche oge mgbe karịa Jesus 'anya nloghachi nke Onyenwe anyị nwere dị iche iche na omume nke Israel na Church.
Mkpagbu ọzọ okwu, abụọ na-akọrọ. Nwere obere ka ha dị ọcha Israel, na nke abụọ, na-ebibi ma na-eme na-ekweghị ekwe mba. (Jer 30: 1-11). The ọgbakọ abụghị nke ndị a na nzube.
Mkpughe 11:15 - The asaa angel fụọ opi ya . Mgbe e nụrụ nke elu-igwe siri ike olu onye kwuru, sị: "Alaeze nke ụwa ugbu a bụ nke Onyenwe anyị na nke Kraịst ya, ọ ga-achị ruo mgbe ebighị ebi ebi."
E n Ụfọdụ na-asị na owuwe na mbilite n'ọnwụ na-adị na-afụ opi ikpeazụ bụ otu ihe ahụ dị ka ndị 7th na-afụ opi ikpeazụ anyị na-ezute na mkpagbu. Ma anyị ga na-emegharị asaa opì-Mkpughe 11:15, na-afụ opi ikpeazụ nke Mbilite n'Ọnwụ.
Mbụ bụ na a dị iche na ma isiokwu na mmetụta na abụọ ndị a opì mgbe opi nke Chineke bụ a opi nke nzọpụta, na iche na asaa opi asaa anyị na-ezute na Mkpughe na-ikpe nke ụwa a. Opi nke Chineke bụ a ịrụ ọrụ nke mbilite n'ọnwụ, na nzukọ nke ndị Chineke.
Ọ bụghị Jehova na-afụ na opì-ike na Mkpughe, kama mmụọ ozi. Mgbe mmụọ ozi na-afụ opi, ọ bụ ihe mgbaàmà na oké mkpagbu ahụ amalite, na nke ikpeazụ 3,5 afọ nwere ike amalitela. Ndien ke akpatre, mgbe opi nke Chineke na-ada ka transmutes ya naanị a isi ihe omume, mgbe nke asaa opi releases ọtụtụ dị iche iche ihe.
1 Ndị Tesalonaịka 5: 2 - Ọ bụrụ na oge na mgbe a kara aka, umu-nne-ya, anyị na-adịghị mkpa dee gị. Ị maara nke ọma na ụbọchị Jehova na-abịa dị ka onye ohi n'abalị. Mgbe ndị mmadụ na-asị, "Udo na ntụkwasịobi," mgbe ahụ, ha na-ata ahụhụ mbibi dị ka mberede dị ka ihe mgbu na-abịa gafee nwanyị dị ime, na ha agaghị agbanahụ. Ma unu onwe-unu, umu-nnam, anọghị n'ọchịchịrị, ka ụbọchị ahụ na-eru gị dị ka onye ohi.
M uzuoku ndị mmadụ ime na-ezo aka na ụbọchị Onyenwe anyị dị ka a kpaara ókè na kpọmkwem ụbọchị nke awa 24, nke na-ewe ke utịt mkpagbu mgbe Jesus anya nloghachi. N'ihi ya ọ pụtara na ụbọchị Jehova na owuwe na-agakọta na-apụ na otu.
Ma a nyochaa nke ụfọdụ bivelverser nke kwuru banyere Jehova Day-egosi na ọ bụghị naanị na ọ na-ezo aka a otu ụbọchị, ma na a oge nke ikpe-ekpuchi ma Mkpagbu, Jesus anya nloghachi na Millennium.
2 Peter 3: 10-23 - a ụbọchị Onyenwe anyị nwere ike na-ezo aka Jesus 'anya nloghachi, mgbe ahụ, anyị maara na ụbọchị ahụ nke eluigwe ga-agbaze, na anyị ga-esi n'eluigwe ọhụrụ na ụwa ọhụrụ na akpa ebe ke 1000 afọ nke Alaeze Ukwu.
Mkpughe 20: 4 - M wee hụ ocheeze, na ha nọdụ na ha e nyere ikike ikpe ikpe. Na m hụrụ mkpụrụ obi bụ onye e gbupụrụ ya isi n'ihi na ha gbara àmà nke Jizọs na okwu nke Chineke na-adịghị efe anụ ọhịa ahụ na onyinyo ya na ọ natara ya akara n'egedege ihu ma ọ bụ n'aka. Ha biri na akara na Kraịst a puku afọ. Ma ndị fọdụrụ n'ime ndị nwụrụ anwụ dịrị ndụ ọzọ ruo mgbe puku afọ ahụ gwụsịrị. Nke a bụ mbilite n'ọnwụ mbụ.
Da mbilite n'ọnwụ mbụ na Mkpughe 20: 4 bụkwa ihe na kemgbe ọtụtụ mkparịta ụka azụ na-apụta, na m na-eche na okwu nke Bible na-ekwu maka onwe ya mgbe anyị na-agụ ya. Anyị pụrụ ịhụ na amaokwu na-ekwu okwu banyere mbilite n'ọnwụ, ọ bụ mbilite n'ọnwụ mbụ. Mgbe ahụ, anyị pụrụ ịhụ na, na e nwere ikwu banyere ndị nwụrụ n'ihi okwukwe mbilite n'ọnwụ mgbe mkpagbu. Ma, ọ pụtara na mbilite n'ọnwụ mbụ bụ naanị ndị mejupụtara nwụrụ n'ihi okwukwe si ukụt? Ọ dịghị, ọ bụghị n'ezie.
D mbilite n'ọnwụ mbụ bụ ihe ụdị ụdị mbilite n'ọnwụ bụ. Anyị nwere ike ịhụ na e nwere ihe abụọ na ụdị mbilite n'ọnwụ. The mbụ na ebighị ebi ndụ na Chineke, na nke abụọ na mbilite n'ọnwụ na mgbe ebighị ebi na-enweghị Chineke. Nke ikpeazụ Resurrection, nke bu ndu ebighi-nkewa si na Chineke, esịnede niile dachie nwụrụ anwụ niile oge, na-ewe ebe ke 1000 afọ nke Alaeze Ukwu. (Mkpu 20: 5)
Mbilite n'ọnwụ mbụ nke bụ hà ndụ ebighị ebi na Chineke na-ewe ebe dị iche iche n'ụzọ. Na NT, anyị na-ahụ ọtụtụ dị iche iche mbilite n'ọnwụ na niile na-abịa n'okpuru Atiya "mbilite n'ọnwụ mbụ".
1. Jizọs n'ọnwụ n'ụbọchị nke atọ. Jesus 'nzọpụta mgbu bụ n'ihi na ìgwè ihe niile na-ọgba aghara. Ọ bụrụ na ọ bụghị ná mma usu nile mmehie fọrọ nke nta 2000 afọ gara aga, nwere anyị nwere a mbilite n'ọnwụ. Mbilite n'ọnwụ Jisọs bụ m mbilite n'ọnwụ.
2. The mbilite n'ọnwụ nke ụfọdụ ndị mmadụ na GL Testament tid.- Hibru 11:35
3rd Ndị kwere ekwe si GL Testament nke mere na njikọ ahụ na ọnwụ Jizọs na mbilite n'ọnwụ. Matt 27: 52-53
4th The Christian Assembly owuwe tupu ikpeazụ na 70 izu nke afọ maka Israel na Jerusalem.
5. The mbilite n'ọnwụ nke ndị àmà abụọ na njedebe nke oké mkpagbu - Up 11:12
6. Mbilite n'Ọnwụ nke GL Testament kwere ekwe na ndị nwụrụ n'ihi okwukwe nke mkpagbu, nke na-ewe ebe tupu mweghachi nke alaeze Izrel. - Dan 12:13, John 11:24, Up 20: 4
Na ɛhe gaps
M Alụlụụ nke ihe ndị na-ewere ọnọdụ n'oge mkpagbu na nkwurịta okwu na nloghachi nke Jesus egosi anyị na ọ dị mkpa maka a temporal ọdịiche dị n'etiti owuwe nke Assembly, na Jizọs anya nloghachi. Ụfọdụ n'ime ihe ndị na-atụ aro na nke a bụ:
oche ikpe Kraịst
2 Ndị Kọrint 5:10 - N'ihi na anyị ga-niile n'ihu oche ikpe Kraịst, na onye ọ bụla nwere ike inweta ihe o mere ná ndụ a, ọma ma nke ọjọọ
G uds okwu na-akụziri anyị na anyị nile ga-otu ụbọchị na-eguzo n'ihu oche ikpe nke Kraịst na-eme ka räkenskab maka anyị na-eme. A n'ụlọikpe na bụ maka gbapụtara na-agaghị mgbagwoju anya na ikpe ke nnukwu ocheeze ọcha ke 1000 afọ nke Alaeze Ukwu. Okwu Grik a ikpe bụ "Bema", na mere akporo ya "Beema ikpe".
1 Ndị Kọrint 4: 5 - Lower mere dịghị ikpe nká, tupu Jehova abịa. O kwesịrị ìhè dị ka ọchịchịrị conceals na-ekpughe obi echiche na ebumnuche, na mgbe ahụ ga-onye ọ bụla nwere ya otuto nke Chineke
Nke a ikpe na-ewe n'ime ozugbo kegide upprycklsen, nke pụtara na mgbe Assembly laghachi na Kraịst na ụwa, ha ama n'ihu oche ikpe nke Kraịst modtaga ụgwọ ọrụ ha.
N Ågot ka bekräfter na a ikpe-ebe ozugbo ka eriri ruo owuwe bụ okenye 24, na-anọchite anya zuru ike Assembly. Ha nọ ebe gburugburu ocheeze Chineke, nke kroner na isi, na-adị njikere ijere Jehova n'oge mkpagbu, tupu mgbe ahụ na Jizọs etịbede mbụ akara ná Mkpughe isi 6
Ọ bụrụ na ndị okenye 24 na-anọchi anya ọgbakọ, ọ pụtara ihe abụọ. Na na a oge a chọrọ n'etiti owuwe na 70 årsveckans mmalite, na n'ihu mbụ mkpebi na n'ihu mbụ ịnyịnya ga-ejidesi, ọgbakọ bụ ugbua na ebe eluigwe.
The ikpe nke mba na mba
D mgbaàmà, nabatakwa nke ndị Jentaịl ga-ekwe omume ma ọ bụrụ na ọ bụghị n'ihi a temporal ọdịiche dị n'etiti owuwe na Jizọs anya nloghachi. Olee ihe ọzọ ga-ma zọpụta na-azoputaghi, bụ ndị ka na-na ha eke ozu nwere ike iche ma ọ bụrụ na ahụ kwesịrị ntụkwasị obi nọ na-ama efopụ ma tụgharịa ebube nke aru nke?
Ọ bụrụ na owuwe-eme mgbe mkpagbu chọta dịghị nnọọ mkpa na ya kee ihe ndị mmadụ tupu Millennium. Anyị ga na-ama nwere a uppdelining na njikọ na owuwe mgbe Jizọs setịpụrụ ụkwụ na n'Ugwu Oliv.
Population nke Millennium
M EOPLE onye na-echekwa n'oge mkpagbu ga-aga n'ime ha eke ozu na Millennium. Ndị a ga-arụ ọrụ, na-ewu ụlọ, ụmụ. Tupu anyị na-aga n'ime Narị Afọ Iri ahụ, a ga-abụ ọtụtụ mmadụ ndị na, n'adịghị ka ọgwụgwụ nke mkpagbu, mgbe mmadụ ga-adị ọzọ obere karịa ọlaedo ọma nke Ofia? (As 13: 9-12)
Israel ga-eme n'ọdịnihu
Na afọ ole ebe Juu na ndị Jentaịl na-otu ahụ dị mkpa oge ọdịiche Jehova ịnọgide na-usoro ihe omume na Israel. The 70 na n'izu ikpeazụ nke afọ bụ oge mgbe Chineke ga-ọzọ na-etinye ya na-elekwasị anya ndị Juu na ndị Israel mba.
Ọgwụgwụ nke församlingenstid n'ụwa enwezu bụghị naanị Akwụkwọ Nsọ amụma ma na-ngosipụta nke a dị mkpa ọdịiche dị n'etiti owuwe na Jizọs anya nloghachi. Ma oche ikpe Kraịst, ndị okenye 24, ikpe nke mba nile, ndị bi na nke na narị afọ iri na Chineke usoro ihe omume Israel bụ, na-atụ aro a.
V na bi n'oge a nke nchere. Ka ọ dịgodị, na-atụ anya na Jehova ga-adịghị anya a ga-akpọ anyị n'ụlọ ya. M nnọọ ike m kweere na anyị bụ ndị a họọrọ ọgbọ ga nwere amara na-enweta Jehova oyi, eluigwe opi na otu mmụọ ozi mkpu.
Ọgbakọ nwetara ya bido na Chineke wụpụrụ nke Mmụọ na Pentikọst, ma ga-akwụsị na owuwe nke ọgbakọ. Ọ bụ nnukwu oge na-ebuli anyị isi, n'ihi na n'oge na-adịghị eru nso napụta anyị.
Ọ dịghị nnọọ amaokwu na Old Testament ma ọ bụ na New Testament na-egosi na chọọchị ga-aga site na mkpagbu oge, ma ọ bụ na chọọchị ga-eguzo ihu na ihu megide àmà na-egosi.
Mkpagbu a na-akpọ "Jekọb nsogbu" (Jer30: 7), ma na-dịghị mgbe a na-akpọ "n'ọgbakọ ma ọ bụ na chọọchị nsogbu".
The angel Gabriel kwusara ka Daniel na 70 izu kpebisiri n'aru ndi-gi (Juu) na n'elu gi n'obodo nsọ (Jerusalem). The ụka na-adịghị kwuru ebe a. Dan 9:24
The ụka enweghị òkè na ndị mbụ 69 izu, na agaghị abụ akụkụ nke ikpeazụ na 70 izu.
Mkpughe owuwe emee n'Isi nke 4: 1 nke bụ mkpagbu nke oge a kọwara n'Isi nke 6-19. The okenye 24 na-anọchi anya ọgbakọ ahụ si na ebe n'ihu mbụ akara na-agbajikwa.
The parish kwuru iri abụọ ugboro atọ ndị mbụ isi Mkpughe, ma mgbe e kwuru okwu n'etiti isi nke 4 na 19.
Mkpagbu a na-akpọ a "ụbọchị iwe" (Zef 1:15) na Bible, ma Jizọs ekweghị inye anyị na-ata ahụhụ iwe. (1 Nke 5: 9), kama nyefee anyị n'aka "iwe" (1 Nke 1:10)
Mkpagbu a na-akpọ Day nke Onyenwe anyị na Bible (Zef 1:15). Ma 1 Tesalọnaika 5: 2-3 na-ekwu na ụbọchị nke Onyenwe anyị (mkpagbu) ga-abịa dị ka onye ohi n'abalị. Mgbe ndị mmadụ (na-ekweghị ekwe) sị, "Udo na ntụkwasịobi," mgbe ahụ see (ekweghị ekwe) na mbibi dị ka mberede dị ka ihe mgbu na-abịa gafee nwanyị dị ime, na ha (nke na-ekweghị ekwe) agaghị agbanahụ. O doro anya na mkpagbu ahụ na ihe ga-adakwasị ndị disbelievers, ma, ọ na-agụnye ndị kwesịrị ntụkwasị obi na-azọpụta.
Anyị ga-agụgụkwa onye ọ bụla ọzọ na-ekwu okwu nke owuwe (1 Ndị Tesalonaịka 4:18). E nweghị obi na-ezi na-ekwu na chọọchị ga-aga site na akụkụ ma ọ niile mkpagbu domstid.
Jizọs kwere nkwa ndị chọọchị na Philadelphia na ya chọrọ iji chebe ya na chọọchị, "napụta gị nke hour ọnwụnwa, nke ga-abịakwasị ụwa dum ma na-ewetara ya ka ndị mmadụ ule." (Mkpu 3:10) Chineke kwere nkwa iji chebe kwesịrị ntụkwasị obi ọgbakọ si na mkpagbu nke oge .
Dị nnọọ ka Enoch e jidere elu-igwe tupu iju mmiri na Noa chebere site Iju Mmiri ahụ, Assembly ga-ezute Kraist tupu mkpagbu na Israel mmapụta-echebe mkpagbu.
N'otu ụzọ ahụ na Chineke na-enweghị ike ikpe Sọdọm na Gọmọra tupu Lọt bụ n'obodo ahụ, Chineke nwere ike ekpe ikpe nke ụwa a n'ihu ndị ezi omume na-arahụ. (1 Gen. 19:16)
Jizọs kwuru nke mkpagbu nke oge mgbe ọ jụrụ, sị: "Vaka mgbe niile na-ekpe ekpere maka ike ịgbapụ ihe niile na-abịa na-eguzo n'ihu Nwa nke mmadụ." (Luke 21:36) Ọ na-eme ka mba uche na Jizọs jụrụ maka ihe ọ bụ na-adịghị njikere na-.
Malakaị 3:18 na-ekwu, Chineke (na mbata) ga-egosi anyị ihe dị iche n'etiti onye ezi omume na onye ajọ omume, n'etiti onye na-ejere Chineke ozi na-adịghị ejere ya. Nga trib kwere na Jehova na-abịa na-akpọkọta ya n'ọgbakọ, mgbe ahụ, anyị na-abịa na ya na-ekpe ikpe n'etiti onye ezi omume na ndị ajọ omume.
Na owuwe, Jizọs na-abịa maka Ya ụka (1 Ndị Tesalonaịka 4: 16-17) mgbe ọ na-abịa na njedebe nke mkpagbu, ọ ga-abịa na ya n'ọgbakọ. (1 Nke 3:13).
N'akwụkwọ ozi ndị na asaa ụka na gwara Jizọs ka "ịnụ ihe Mọ Nsọ na-ekwu na ọgbakọ." Ma na oké mkpagbu ahụ, mgbe na Mmụọ Nsọ na chọọchị bụ n'akụkụ ọdụ, ọ na-ekwu, sị: "Onye nwere ntị, ya nụrụ" (Mkpughe 13: 9) Ọ omits ndị Assembly, ebe e nweghị ụka na-ege ntị na Mmụọ na-ekwu na na-aga site na mkpagbu.
Na-emegide Kraịst ga-eme ka agha na ndị nsọ, na-enwe ike imeri ha. (Mkpu 13: 7). Ma, ọ pụghị ịbụ township kwuru ebe a. Jizọs n'onwe ya kwere nkwa na "helvets ọdụ ụgbọ mmiri ga-adị ka ọgbakọ nke ndị dike." (Matthew 16:18)
D mbilite n'ọnwụ mbụ na Mkpughe 20: 4 bụkwa ihe na kemgbe ọtụtụ mkparịta ụka azụ na-apụta, na m na-eche na okwu nke Bible na-ekwu maka onwe ya mgbe anyị na-agụ ya. Anyị pụrụ ịhụ na amaokwu na-ekwu okwu banyere mbilite n'ọnwụ, ọ bụ mbilite n'ọnwụ mbụ. Mgbe ahụ, anyị pụrụ ịhụ na, na e nwere ikwu banyere ndị nwụrụ n'ihi okwukwe mbilite n'ọnwụ mgbe mkpagbu. Ma, ọ pụtara na mbilite n'ọnwụ mbụ bụ naanị ndị mejupụtara nwụrụ n'ihi okwukwe si ukụt? Ọ dịghị, ọ bụghị n'ezie.
Mbilite n'ọnwụ Jizọs n'ụbọchị nke atọ. Jesus 'nzọpụta mgbu bụ n'ihi na ìgwè ihe niile na-ọgba aghara. Ọ bụrụ na ọ bụghị ná mma usu nile mmehie fọrọ nke nta 2000 afọ gara aga, nwere anyị nwere a mbilite n'ọnwụ. Mbilite n'ọnwụ Jisọs bụ m mbilite n'ọnwụ.
Mbilite n'ọnwụ nke ụfọdụ ndị mmadụ na GL Testament tid.- Heb 11:35 The kwere ekwe si GL Testament nke mere na njikọ ahụ na ọnwụ Jizọs na mbilite n'ọnwụ. Matiu 27: 52-53
The Christian Assembly owuwe tupu ikpeazụ na 70 izu nke afọ maka Israel na Jerusalem.
Mbilite n'ọnwụ nke ndị àmà abụọ na njedebe nke oké mkpagbu - Up 11:12
Mbilite n'ọnwụ nke ndị GL Testament kwere ekwe na ndị nwụrụ n'ihi okwukwe nke mkpagbu, nke na-ewe ebe tupu mweghachi nke alaeze Izrel. - Dan 12:13, John 11:24, Up 20: 4
D et a bụ akụkụ anọ ke nsonso - Jizọs laghachiri tupu oké mkpagbu ahụ, nke m na mbụ e dere na-esonụ posts:
Tebulu og mbipụta
E ne nke mbipụta a na-atụle mgbe anyị na-ekwu banyere Nga trib ozizi - na owuwe nke ọgbakọ ahụ n'ihu mkpagbu ma ọ bụ nke ikpeazụ izu nke afọ - bụ obere Nga tribs akụkọ ihe mere eme ebe ọ bụ na a ma ama Margeret McDonald Amụma si 1800s nke emetụta John IGBOB ya nkà mmụta okpukpe.
Ma ihe m na-eche ndị na-akpali n'ihi na ha na-eji dị ka a counter esemokwu mgbe anyị na-ekwu Nga trib ozizi, nke ahụ dị ka a ozizi ọhụrụ, na ndị na-na mbụ a kụziiri site akụkọ ntolite nke ụka. Nke a post ga-agbaso na-adabere na ndị a jụrụ na ajụjụ.
The kasị counter-arụmụka
E ne nke kasị nkịtị argment na Nga trib ozizi bụ si otú a "ọ bụ ozizi ọhụrụ ka ọ na-credible." Ma, e nwere ọtụtụ nsogbu na arụmụka a. Nke mbụ bụ na ọ na eleghara eziokwu ahụ bụ na Bible na-akụzi na nghọta nke ọgwụgwụ oge amụma na-adịghị ghọtara ma ọ bụ ekpughe, tupu oge na ndị a na-atụghị ihe-ebe.
Mgbe Daniel nwetara ụfọdụ amụma na igosipụta ọgwụgwụ oge, o mere ka Jehova na ọ na-aghọta ha. Jehova Daniel zara na "okwu ndị a na-anọgide zoro ezo ha akàrà, rue na njedebe nke oge." (Dan 12: 9)
Nghọta nke okwu amụma
N bụ ndị ọzọ okwu, anyị na-ahụ okwu Jehova mezuru na okwu nke amụma Bible, otú ahụ ka anyị na-na-a ezi nghọta nke okwu amụma.
Ọ bụghị ihe ijuanya na akụkọ ihe mere eme nke chọọchị ahụ nwere ajụjụ banyere amụma Ezikiel 48, nke na-ekwu nke-isi nke Gọg ga-otu ụbọchị ọgụ Israel na a mmekota nke Muslim mba. N'ihi na ọtụtụ puku afọ, Israel adịghị, na a amụma na-akọ banyere onye agha na mba na-adịghị adị, kere aghara.
Amụma ndị ọzọ na jikọọ ma anyị akụkọ ihe mere eme ma na nkà na ụzụ na anyị na-enwe na-adịbeghị anya ọtụtụ narị afọ, ihe na-ga-abụrịrị a omimi ndị dịrị ndụ tupu. Olee otú onye na-akọwa abụọ ndị àmà nke Mkpughe isi 11, bụ ebe ma ha ọnwụ na mbilite n'ọnwụ, ga-agba àmà site ụwa dum? Ma ọ bụ na onyinyo nke anụ ọhịa nke na-abịa dị ndụ ma na-ekwu okwu na-etu ọnụ okwu?
Anyị ga ndị ọzọ okwu, ka a na nghọta ziri ezi nke okwu amụma dị ka anyị na-agakwuru ndị oge nke ya ẹkụre.
Spiritualising nke amụma Bible
D et eziokwu na akụkụ nke okwu amụma a zoro ezo ma na-esi ike ịkọwa ruo mgbe anyị na-ahụ gwụ, bụ ihe na-ji ukwuu nke akụkọ ntolite nke ụka.
N'afọ 430 OA. Dere ụka nna Augustine akwụkwọ usoro "City nke Chineke", nke a na-ewere dị ka onye nke ya kasị mkpa na inflytelsesrika arụ ọrụ. Augustine spiritualized Bible na amụma ahụ na-arụ ụka na narị afọ iri (Millennium) malitere na ga-anọgide na nke na-abịa.
Akwụkwọ Nsọ amụma ga, na ndị ọzọ okwu ike na-aghọta ma ọ bụ kọwaara n'ụzọ nkịtị. Ọ bụ nke a spiritualization nke Akwụkwọ Nsọ amụma na ndị akara akụkọ ihe mere eme nke chọọchị na otú ọ förtolkade ha na maka ọzọ puku afọ.
Ndị nna chọọchị n'oge
M otu tupu anyị nwetara a "MMALITEGHACHI" nke amụma Bible ebe anyị ọzọ malitere ịhụ na ịkọwa ha n'ụzọ nkịtị, ọ ma na-egosi ihe mere eme nke chọọchị na na mgbakwunye na nke Ndịozi, otú a kwa nwere n'oge Fathers nke ụlọ blocks nke ihe ọmụmụ ha, nke bụ ihe ndabere nke tupu trib ozizi . Ọ bụkwa a eziokwu na ọ fọrọ nke nta niile nna chọọchị n'oge kwusara premillennialism.
Justin Martyr (makwaara dị ka Justin, ọkà ihe ọmụma 110-165 e.Kr) nke ukwuu aka ichepụta na Church mmụta okpukpe, gara ọbụna n'ebe dị anya na ọ na-atụ aro na ọ bụrụ na onye ọ bụla kwusara ihe ọ bụla ọzọ, ọ bụ a jụrụ okwukwe. (1)
A mbịaghachi nke amụma Bible
E soro ọtụtụ afọ nke ọchịchịrị ime mmụọ nke Middle Ages na Europe na anyị nwetara Ndozigharị ahụ, na ji nwayọọ nwayọọ na anyị malitere ịhụ a mbịaghachi nke amụma Bible ebe förtolkningen bụ nkịtị.
Nke a "revival" malitere kpọrọ n'etiti ndị Puritan, a reformatory ije na pụta na England gburugburu 1560s, nke ngwa ngwa mere ka nghọta nke owuwe bụ a iche iche ihe omume si Jesus 'anya bịa.
Ndị ndú ha "Dịkwuo Mather" nke bụ a Puritan chọọchị, Oman na ọkà mmụta bụ ndị nwere oké mmetụta na ndụ ime mmụọ nke Massachusetts rụrụ ụka na Saints na "na-ejide elu nke elu-igwe agbanahụ ikpeazụ Itie ọkụ". (2)
A akụkọ ihe mere eme development
F n iji gbaghaa na Nga trib ozizi bụ a "ozizi ọhụrụ" na ndị dabeere na na John IGBOB ozizi, ndị na-esonụ bụ a akụkọ ihe mere eme mmepe na a utplock okwu site Church Fathers na ndị na-kwuputela Nga trib echiche ya na ozizi ya site akụkọ ntolite nke ụka.
Nke a pụtara na mgbe ndị mmadụ na-ekwu na Jizọs laghachiri tupu mkpagbu, ma ọ bụ na Nga trib ozizi ozizi na-adịghị ekwusa tupu 1800s, ọ bụ nnọọ eziokwu. Iji gosi na ozizi a adị ogologo oge tupu John IGBOB, ebe a bụ nanị ole na ole ihe atụ nke ndị mmadụ na chọọchị ndị nna nna onye kpere ndị a echiche:
Nga tribs akụkọ ihe mere eme
The First Epistle of Clement, 23, e dere gburugburu afọ 96 AD - na ike ịbụ Clement ka Ndị Filipaị 4: 3 na-ezo aka dị ka onye ndú na chọọchị na Rome. " Of a eziokwu, n'oge na-adịghị na mberede ga-Ya Ga-emezu , dị ka Akwụkwọ Nsọ Ọzọkwa na-agba àmà, si," Seedily ga-abịa, na agaghị ganānọgide ", na" Jehova ga-mberede abịa n'ụlọ nsọ Ya, ọbụna Onye Nsọ onye unu anya ".
Na nke abụọ Epistle of Clement, anyị na-agụ: " Ka anyị ọ bụla hour atụ Anya alaeze Chineke na ịhụnanya na ezi omume, n'ihi na anyị na-amaghị ụbọchị Onyenwe Igosi ."
Irenaeus 130-202 AD - na-ede na ya inem "Against Heresies 5:29 -" Ma e nwere tupu, mgbe na ọgwụgwụ na Church ga-mberede ejide elu a, ya kwuru, "ga-enwe mkpagbu dị otú ahụ dị ka ọ bụghị kemgbe mmalite, agaghi-ịjụ" .
The Didache, 70-180 AD - Chapter 16, Nkebi nke 1: Nọrọ na nche n'elu ndụ gị; ka gị oriọna gaghị anyụ anyụ, ma ọ bụ gị n'úkwù ungired, ma a ga-akwadebe, n'ihi na i maghi oge awa na nke anyị Jehova ga-abịa. "
Tertullian 155-245 AD - Ma ihe a ntem bụ na ọsọ na-abịa biakwa obibia nke Onyenwe anyị , ugbu a ekesịpde niile, ugbu a elu nke ukwuu, ugbu a a na-enwe mmeri Otu! "
Cyprian, 200-258 AD, dere, sị ndị na-esonụ na "treatises nke Cyprian" nke ọ na-akọwa ọgwụgwụ oge na oké mkpagbu: "Ị na-enye Chineke ekele, na unu ikele onwe gị, Na site n'oge opupu na ị na-anapụ , na napụta Ụgbọ Okpukpu na ọdachi ahụ na-eru nso ? Ka anyị na-ekele ụbọchị Which nyere onye ọ bụla n'ime anyị gaa n'ụlọ nke ya, nke na-anapụta anyị hense, na-eme ka anyị free si n'ọnyà nile nke ụwa.
Onye Ọzụzụ Atụrụ nke Hermas (mụbara 140 AD) bụ a Christian dere bụ onye e weere na-otu nke Apostolic Fathers. O dere, sị ndị na-esonụ banyere oké mkpagbu: " Ọ bụrụ na ị The Ugbu a kwadebe onwe unu, na-echegharị obi gị nile na-echigharịkwuru Jehova, ọ ga-ekwe omume n'ihi na ị ga-agbanahụ ya " (6)
Victorinus (a maara nke ọma afọ 270 AD na nwụrụ 303 AD) dere akwụkwọ na-akọwa n'Akwụkwọ Mkpughe, na dere na-esonụ banyere Up 6:14 - "eluigwe na-ebu dị ka akwụkwọ mpịakọta na-afụkọta. N'ihi na heaven bụ kwapụwo, Na ndi Church ga-anapụ. "Ma ọ bụla n'ugwu na agwaetiti wepụrụ fromtheir ebe na-akpachi anya na n'oge ikpeazụ Mkpagbu niile ma la fromtheir ebe; ya bụ, na ndị ọma a ga-ewepụ, na-achọ iji zere mkpagbu.
· Ephrem Siria (306-373 AD) - " N'ihi na ndị nsọ niile na Chineke hoputara na-noro, tupu Mkpagbu ahụ bụ na-abịa, na-e-nwe-ayi ghara Ha na-ahụ aghara ahụ bụ na-anyịgbu ndị World N'ihi mmehie anyị "(On Ikpeazụ Times, àmà na-egosi, na End of the World, nke Ephrem Siria, 373 AD (7)
John Calvin - ụka ndozigharị ahụ nke biri ndụ na 1500s. " Jikere na-atụ anya ya okwu kwa ụbọchị, ma ọ bụ kama ọ bụla oge " "Dị ka O kwere nkwa na O ga-alaghachi nto anyị, anyị kwesịrị ijide onwe anyị njikere, n'oge ọ bụla oge na-revieve ya." "Taa, anyị kwesịrị ịkpachara anya ịghọta nso nloghachi nke Kraist. "
Martin Luther kwuru dị ka ndị a: " m kwere na niile ihe ịrịba ama, nke na-na-emenụ tupu ikpeazụ havealready pụtara. Ka anyị na-eche na ọbịbịa nke Kraịst bụ n'ebe dị anya ; Ka anyị leba anya na ndi isi welie; ka anyị na-atụ anya Mgbapụta anyị ga-abịa na agụụ na-eji obi ụtọ n'obi. "
N'akwụkwọ ya, "Ịghọta End Times Amụma, acclaimed Paul N. Benware, e nwere ọtụtụ ndị na 1600 na 1700s onye malitere ịkụziri a owuwe na dị iche na Jizọs 'anya nloghachi. (3)
Peter Jurie, kụziiri n'akwụkwọ ya "ọ bịakwutere nnapụta nke ụka" ke 1687 na Kraịst ga-abịa na ikuku ighọ ndi nsọ nile ma laghachi n'eluigwe tupu Amagedọn. O kwuru banyere a nzuzo owuwe tupu Jehova na-abịa na ebube na ike.
Ma Filip Doddridge na John Gill kwuru na NT (1738 na 1748) iji okwu ndị na-owuwe na Jehova imminenta alaghachi.
A Babtist ndú Morgan Edwards, onye a mụrụ na-eje ozi na Wales tupu akpụ akpụ na United States na 1761. Na 1740 nyere Morgan okwu nke Nga trib echiche dị ka ọ na-akụziri na eschatology.
James Mcknight (1763) na Thomas Scott (1792) kụziri na ezi omume ga-aga eluigwe, bụ ebe ha ga-abụ na ntukwasi ruo mgbe ikpe Chineke nke dị n'elu (9)
John IGBOB - 1800-1882
J ohn IGBOB A mụrụ London, na ya bu onye ga-enwe oké mmetụta na tupu trib ozizi, dị ka ọ na-n'usoro-etinye otu ihe ahụ mgbe ọ na-amụ isiokwu.
IGBOB kwubiri na a ga-a doro anya dị iche n'etiti Israel na Church, na ọ bịara doo ya anya na Jizọs imminenta laghachiri, nke pụtara na Chineke nwere ike na-abịa azụ n'oge ọ bụla, na-enweghị ụfọdụ antecedent odide. Na 1827, o mepụtara ụfọdụ ụkpụrụ ndị bụ isi ga-eji mara a ọhụrụ nkà mmụta okpukpe usoro maara dị ka "dispensationalism".
Margeret Macdonald amụma
N Ågot dị mkpa na-emetụ na nke siworo n'usoro ochichi nke na ọtụtụ mkparịta ụka na-agha nghọta, bụ kpọmkwem Margeret Macdonald amụma na a na-ewere ga-abụ na nke ekara IGBOB si ozizi na nkà mmụta okpukpe. The echiche e rụrụ ugbua na 70s site Dave MacPherson na "The apụghị Ikweta Ekweta Nga Trib Mmalite 1973 (5)
Dave MacPherson nwere echiche e ji mara ọtụtụ n'ime arumaru ka oruru maka Nga trib ozizi bụ ụgha.
Margeret, mgbe ahụ, afọ 15, gaara abuana ke a adọrọ adọrọ ekpere nzukọ Scotland - na 1830. N'ebe ahụ, ọ ga-buru n'amụma ma nye a amụma nke o kwuru, na owuwe ga-ewere ọnọdụ tupu mkpagbu.
J AG njikọ a ka amụma ya nile nke mere na gị onwe gị nwere ike na-ekpe ikpe ya. N'ụzọ dị mwute, ederede na-adịghị sụgharịa Swedish:
A bụ otu ihe kwuru si amụma nke m pụta ìhè ederede na bụ na-akpali:
" Na hụrụ ndị nke Good n'ime ihe awfully ize ndụ, gbara ya gburugburu ụgbụ na entanglements, banyere na-agbalị, na ọtụtụ ihe na-aghọgbughị na ikpe. Ugbu a ga-ajọ-ekpughe, na ike nile na ihe ịrịba ama na ụgha ebube, mere na ọ bụrụ na ọ bụ na o kwere omume na-hoputara ga-ghọgbughị ya. - Nke a bụ ọkụ na-enwu ikpe Olee nke ka na-agbalị anyị. - Ọ ga-abụ maka purging na ọcha nke ezigbo ndị so n'ahụ nke Jesus; ma Oh Ọ ga-abụ a-acha ọkụ ọkụ ikpe. Mkpụrụ obi ọ bụla ga-maa jijiji na nnọọ center. Onye iro ga na-agbalị ịma jijiji ihe niile anyị kweere - Ma ikpe nke ezi okwukwe ga-hụrụ na-asọpụrụ ma na otuto na ebube. Ọ dịghị ma ihe bụ nke Chineke ga-eguzo. The nkume-ala anụ ga-apụta ìhè - ịhụnanya nke ọtụtụ uche wax oyi m ugboro ugboro saidthat n'abalị, igbochi kemgbe, ugbu a ga-jogburu onwe n'anya a ụgha Christ ga-hụrụ na ụwa a. na ihe ọ bụla ma dị ndụ Christ na anyị nwere ike ịchọpụta a jogburu onwe-anwa onye iro na-aghọgbu - ma ọ bụ na ọ bụ na niile deceivableness ajọ omume ọ ga na-arụ ọrụ - o willhave a counter-party ọ bụla akụkụ nke eziokwu Chineke na ihe na-eṅomi maka ọ bụla na-arụ ọrụ nke spirit. Mmụọ ga na a ga-awụkwasị ndị Church, ka o wee dị ọcha na jupụtara Chineke - na dị nnọọ ke hà ka Mọ nke Chineke na-arụ ọrụ,
Nke a bụ Karịsịa The Nature of ikpe, site na nke Ndị ruo Ònye ga-agụ ná ndị kwesịrị eguzo n'ihu Nwa nke mmadụ. A Ga-enwe eyi ikpe kwa, ma, 'tis Kachanụ ọnwụnwa. Ọ na-ada na site mwụpụ nke Mmụọ, na ga nri Mmụba na Dị ka Mọ wụsịrị. The ikpe nke Church bụ site àmà na-egosi. Obu site na Mmụọ ahụ jupụta na anyị ga-edebe edebe. Ọgwụgwụ see okwu.
Jụrụ na tebulu
O m na i nwere ike ịghọta amụma a, ị ga-aghọta na ọ bụ nnọọ ihe doro anya tebulu banyere amụma a si Margeret, na n'uzọ ọ ga-enwe mmetụta John IGBOB mmụta okpukpe:
Firstly, e nwere ọdịiche dị na dị n'etiti amụma na Jọn IGBOB n'oge akwụkwọ. The amụma na 1830, ma ugbua ọtụtụ afọ tupu mgbe ahụ, IGBOB dere akwụkwọ banyere n'oge owuwe tupu mkpagbu. Ọ bụ otú agaghị ekwe omume IGBOB gaara acha site amụma a.
Mkpagbu ọcha ọkụ
F ntị Nke abuo, ọ bụ ihe ndị ahụ kpọmkwem nke amụma bụ na-eme ka ọ gaghị ekwe omume. Ọ bụrụ na ị, dị ka m nwere ike na-agụ ma na-aghọta ihe e dere, mgbe ọ dịghị ihe na amụma na-egosi na Margeret abughi echiche ma ọ bụ buru amụma na a tupu trib nkọwa. Margeret "amuma" nke gụnyere ndị na-esonụ:
"Nke a bụ ọkụ na-enwu ikpe Olee nke ka na-agbalị anyị. - Ọ ga-abụ maka purging na ọcha nke ezigbo ndị so n'ahụ nke Jesus; ma Oh Ọ ga-abụ a-acha ọkụ ọkụ ikpe
Nke a bụ Karịsịa ọdịdị nke na-ekpe ikpe, site na nke Ndị ruo Ònye ga-agụ ná ndị kwesịrị eguzo n'ihu Nwa nke mmadụ.
The ikpe nke Church bụ site àmà na-egosi. Obu site na Mmụọ ahụ jupụta na anyị ga-ga-edebe "
Mgbe Margeret na-ede na mkpagbu, ma ọ bụ ikpe oge bụ ọcha n'ọgbakọ, na mkpagbu Assembly ga-aga site na-abịa site na àmà na-egosi, mgbe ahụ, ọ bụ ihe ọ bụla ma doo anya post-trib echiche na ihe ọ bụla Jizọs laghachiri tupu oké mkpagbu ime.
Thirdly, amụma n'ezie mkpa. Ọ dị mkpa na nke bụ ma ozizi bụ na Akwụkwọ Nsọ ma ọ bụ, na ọ bụ, ndị ọzọ okwu na okwu Chineke na-ekpebi.
Owuwe bụ "nso" ma ọ bụ yiri
E ne nke akụkụ kasị mkpa mgbe anyị na-ekwu banyere owuwe, bụ na ọ bụ "nso," nke pụtara na ọ na-metụtara, na ihe ị ga-atụ anya na-eme n'oge ọ bụla.
The ihe okwu "na-eru nso" bụ "àgwà ma ọ bụ ọnọdụ nke ịbụ ihe Ọnọdụ" - An omume ma ọ bụ ọnọdụ nke na-aga ime. Ya mere mgbe anyị na-ekwu okwu nile nke Jehova "imminenta" ma ọ bụ metụtara laghachi na njikọ na ọgwụgwụ oge amụma, n'ihi ya, ọ pụtara nanị na nloghachi nke Jizọs na chọọchị pụrụ ịhụ n'oge ọ bụla, na-enweghị ihe ọ bụla antecedent odide.
Okwu "na-eche" na a Bible amaokwu a na-si sụgharịa okwu "anamenein" nke pụtara "na-eche maka onye na-abata." Ọ na-egosi "ifịk ifịk" àgwà na ọrụ nke onye na-echere.
Owuwe - ihe unsigned omume
D et nanị ụzọ owuwe nke ọgbakọ pụrụ ịbụ "na-eru nso" na unsigned, bụ na ọ ga-ewere ọnọdụ tupu mkpagbu ma ọ bụ nke ikpeazụ izu nke afọ. Na ndị ọzọ okwu, ọ dịghị amụma ihe ịrịba ama nke ga-ebu owuwe, ma ọ bụ ihe na Assembly kwesịrị maara nke ga-eme n'ihu ya na ihe a merenụ nwere ike ebe.
Ọ bụrụ na chọọchị ga-echere ka ụfọdụ ihe ịrịba ama, ya mere, ga-enwe, ma ọ bụ na-a mkpa "mgbe niile echere Jehova nloghachi."
T ọrịa N'adịghị ka owuwe bụ Jizọs anya nloghachi bụ "nso", mgbe ahụ, a ga-ụfọdụ na-egosi ma ọ bụ ihe mere tupu Jizọs nwere ike na-etinye ha na ụkwụ na n'Ugwu Oliv.
First, Israel ga-azụ ná mba ha. Na-emegide Kraịst ga-steepụ-atụ, anyị nwere na-enweta abomination nke tọgbọrọ n'efu, na anụ ọhịa ahụ. The amụma abụọ ga-abịa n'ihu na-ebu amụma n'oge 3,5 afọ, na ikpe Chineke na iwe ga-awụpụ n'elu ụwa a. N'ikpeazụ, mba ọ bụla ga-echigharị megide Israel, na anyị ga-enweta ya dị ka Bible na-akpọ Amagedọn.
The enweghị akwado okwu
D et na dị mkpa mgbe anyị na-ekwu banyere Assembly owuwe, bụ na ị na-nanị nwere akpagbu ngụkọta enweghị dị nke na-akwado okwu, nkwa nke ndụ ebighị ebi maka ndị na-anọgidesi ike na-enye ndụ ha n'oge mkpagbu ahụhụ, ma ọ bụ nkwa ike n'oge na-emegide Kraịst na-achị.
Ọ ga-adị otú ahụ chọọchị na-kara aka na-aga site mkpagbu, Jehova ga-doro anya na-akwadebe ma na aka na ya n'ọgbakọ banyere nke a.
Okwu na-agba anyị
G uds okwu akpọ anyị anọgide na-enwe a mgbe nile na-atụ anya nke Jizọs laghachiri, nke mere bụ a ezi omume na-enweghị ihe ọ bụla antecedent odide. Ebe a na-atụ nke ụfọdụ nke amaokwu a na-ma na-atụ na-egosi anyị na chọọchị ga-ebi mgbe nile na-atụ anya nke Onyenwe anyị Jizọs na-abịa ka ndị ya:
Ndị Rom 13: 11-12 - Lezienu nile, nke ukwuu na ndị ọzọ, dị ka unu onwe-unu mara ihe oge na-ata ahụhụ, na oge awa ahụ eruwo ka unu teta n'ụra. N'ihi na ugbu a bụ nzọpụta anyị nso karịa mgbe anyị bịara kwere. N'abalị na-agamiwo, ụbọchị ya dị nso. Ya mere ka anyị jụ ọrụ nke ọchịchịrị ma na-etinye ihe agha nke ìhè.
1 Ndị Kọrịnt 1: 7 - ya mere na unu bu n'azụ na ọ dịghị onyinye, mgbe m na-eche maka Onyenwe anyị Jizọs Kraịst, echiche.
File 3:20 - Anyị ga-enwe anyị amaala dị n'eluigwe, ma si n'ebe anyị na-echere, na Onyenwe anyị Jizọs Kraịst dị ka Onye Nzọpụta.
Filipaị 4: 5 - Ka gị nwayọọ ike ka mmadụ niile mara. Jehova dị nso!
1 Tesalonaịka 1:10 - na-eche maka Ọkpara ya si n'eluigwe, ọ kpọlitere ndị nwụrụ anwụ, Jizọs, bụ onye na-azọpụta anyị nke na-abịa iwe.
Tit 2:13 - mgbe anyị na-echere ihe nāgara nke olileanya na nke Chineke ukwu ahụ nakwa Onye Nzọpụta anyị Jizọs Kraịst, bụ ebube pụtara.
Hibru 9:28 - na ọ ga-apụta a ugboro abụọ, ọ bụghị na-agba mmehie ma zọpụta ndị na-na-na-eche ya.
Hibru 10: 37 - N'ihi na a obere obere mgbe, ọ bụ onye na-abịa, ọ ga-agaghị egbu oge.
James 5: 7 - ndidi chere mere, ụmụnna m, ruo mgbe Jehova na-abịa.
James 5: 8 - Na-unu nakwa inogide na ike gị obi, n'ihi na nke na-abịa nke Jehova dị nso.
1 Pita 4: 7 - The ọgwụgwụ ihe niile dị nso.
Jude 1:21 - na-onwe-unu ịhụnanya Chineke, mgbe ị na-eche maka Onyenwe anyị Jizọs Kraịst na ebere ya ga-enye gị ndụ ebighị ebi.
Up 3:11 - M na-adịghị anya. Jide ihe i nwere, nke mere na ọ dịghị onye ga-ewe gị okpueze.
Mkpughe 22: 7 - "Ma, le, m na-abịa ngwa ngwa.
Mkpughe 22:20 - Ọ na-agba akaebe ihe ndị a kwuru, sị, "Ee, m na-abịa ọsọ ọsọ." Amen, bia, Onyenwe anyị Jizọs!
Ya mere nke a bụ ụfọdụ n'ime amaokwu Baịbụl ndị na-egosi anyị na-atụ anya na Assembly ga-enwe. Okwu na-ekwu okwu nke Jehova nloghachi metụtara, na Assembly mkpa mgbe niile a ga-akwadebe. Ha na-akọrọ banyere nlọghachi nke Onyenwe anyị na-enweghị tupu ama, ha na-enye nkasi obi na agbamume na-enweghị metụtara ha mkpagbu.
Maranatha - Ị Onyenwe anyị wee
1 Ndị Kọrịnt 16:22 - Ọ bụrụ na onye ọ bụla adịghị n'anya Jehova, ọ ga-bụrụ ọnụ. Marana tha.
E ne nke ike arụmụka maka chọọchị n'oge biri na mgbe nile na-atụ anya nke Jizọs laghachiri bụ ụzọ ha kelee onye ọ bụla ọzọ na na Paul-eji n'otu n'ime akwụkwọ ozi ya: Marana'ta.
The okwu Marana'ta bụ Aramaic na pụtara "Ị bụ Onyenwe anyị, bịa!" Ọ bụ nkwupụta nke Assembly ọchịchọ na nghọta na Jehova nwere ike ịbịa n'oge ọ bụla. Ya mere, mgbe Pọl na-ede mmechi ekele na 1 Kọrint 16, ọ na-ekwu na ọ bụrụ na onye ọ bụla adịghị n'anya Jehova, ọ ga-abụ "anathema". The okwu pụtara iwe, wee bụrụ ọnụ si "Marana tha," ndị Jehova na-abịa.
Ọ bụrụ na ndị Assembly enweghị ihe na-atụ anya na Jehova ga-abịa, ha na-eji a na ekele, nke bụ ma a ekpere, a arịrịọ a na oku maka nloghachi Jesus.
Paul echere Jehova
Mgbe anyị na-ekwu na-akọwara oge anyị nke anyị bi na, ma kwere na anyị bụ ndị ọgbọ na ga-ahụ Jehova lọta, ọ bụ n'ihi na anyị na-atụnyere ndị amụma agwa nke mkpagbu. N'ihi ihe ịrịba ama na anyị pụrụ ịhụ na Jehova na-Day na-eru nso, na na mụrụ ụfụ mụbaa.
Na ndị ọzọ okwu, esịtidem na mpụga ihe ịrịba ama nke na-egosi na nke 70 na nke ikpeazụ izu nke afọ a na-eru nso, na otú ahụ nwekwara owuwe nke ọgbakọ.
J esse Forest Silver, dere n'akwụkwọ ya "Jehova nloghachi dere nke Apostolic Fathers:" Ha na-atụ anya Jehova nloghachi na oge ya. Ha chere na oge a metụtara, dika Jehova kụziiri ha ka ha nwere a na-eche nche àgwà. (13)
John F. Walvoord, a Christian ọkà mmụta okpukpe achikota otú a: "The Central mmewere nke tupu trib na thighs, ya bụ na ozizi Jehova imminenta na metụtara nloghachi, bụ a ma ama ọrụ na chochi mbu, onye bi na mgbe nile na-atụ anya nke Jehova na-abịa maka ya nzukọ. (12)
H istorien na-egosi anyị na n'agbanyeghị oké enweghị ọhụụ amụma, ma ọ bụ ndị spiritualization nke okwu amụma nke fọrọ nke nta ka 1,000 afọ ruo mgbe Ndozigharị ahụ, n'ihi ya, bụ akụkọ ntolite nke ụka na chọọchị n'oge na n'oge Fathers nwere a mgbe nile na-atụ anya nke Jizọs na-abịa.
Nga ọchịchị puku afọ, nke pụtara na Jizọs lọta ga-ewere ọnọdụ tupu Millennium n'ụzọ nkịtị fọrọ nke nta okụrede mgbe Council of Ephesus, na ecumenical kansul na 431 AD, e kpebiri, ma were nke a dị ka ndị jụrụ okwukwe. Ọ bụ mgbe e mesịrị n'oge Ndozigharị na anyị nwere ike ịhụ otú okwu amụma ọzọ ghọrọ ndụ mere.
Nga trib ozizi e systematized na 1800s site amasị nke John IGBOB, kama na-ekwu na ozizi adịghị tupu oge, dị ka na-ekwu na "ziri ezi site na okwukwe" bụ a ezi ozizi tupu Martin Luther natara echiche banyere nke a. O doro anya na ndị kwusara ozi ọma "ziri ezi site na okwukwe" tupu 1500s, ma Jehova na-eji Martin Luther na a n'ụzọ pụrụ iche iji mee ka eziokwu a ìhè. N'otu ụzọ ahụ o mere na-John IGBOB na okwu nke owuwe na Jizọs laghachi.
Anyị na-echere Jehova nloghachi
P recis na okwu na-akpọ anyị ka anyị na-echere ọbịbịa nke Jehova. Anyị na-adịghị echere pụrụ iche, ma ọ bụ na a ihe omume ga-erukwa na-ejikọrọ na owuwe. Jizọs nwere ike ịbịa n'oge ọ bụla, bụ nke na-ndụmọdụ na agbamume na Jehova nwere maka anyị. The mgbe nile na-atụ anya na Jizọs nwere ike ịbịa azụ n'oge ọ bụla.
Ọ bụ Paul nkasi obi ndị chọọchị na Tesalonaịka, na dị nnọọ ka ọ bụ a kasie anyị obi. Anyị na-echere Ya ka-, ka napụta zọpụta anyị n'ọnụma bia (1 Ndị Tesalonaịka 1:10)
Paul Boyer, Mgbe Oge ga-Ọ dịghị More: Amụma Ikwere na Modern American Culture (Cambridge, MA: Belkndap Press, 1992), page 75th
Paul N. Benware, Understanding End Times Amụma, 1955 page 197-198)
Tommy Ice, "Morgan Edwards: A Nga IGBOB Rapturist," The Conservative Theological Jounal, 1997 page 4-12.
Dave MacPherson, The apụghị Ikweta Ekweta Nga Trib Mmalite, 1973
Onye Ọzụzụ Atụrụ nke Hermas, A oyiri nke complte odide nke The Sherherd nke Hermas nwere ike ịchọta na Internet.
"St. Ephraem 'na Catholic Encyclopedia na Internet
Crutchfield "The agọzi Hope na Mkpagbu na Apostolic Fathers, page 88-101
Paul N. Benware, Understanding End Times Amụma, 1995 page 10-12
The First Epistle of Clement, 23 (e dere ihe banyere 96 AD)
John F. Walsvoord, Owuwe Ajụjụ Revised na Buru Ibu Edition, Zondervan, Grand Rapids, 1979, 51
Jesse Silver Forest, The nwenụ Lọghachinụ, New York 1914, 62-63
Wee si hour "page 221-222
D et a bụ ise nke usoro isiokwu bụ "Jizọs laghachiri tupu oké mkpagbu ahụ," bụ nke a na-azara ọnụ maka a owuwe nke Chineke nwunye na ọgbakọ ahụ n'ihu ruo mgbe ikpeazụ izu nke afọ, na Mkpagbu ọkọkpọhi ya mmalite.
Ọ bụ ezie na owuwe bụ otu n'ime ihe na NT na Assembly nzuzo, otú anyị nwere ike ka na-ahụ a red eri ihe oyiyi na akara na gt. Nke a post na-ewe a amalite na akụkọ na Enoch, Lot, Rebecca na Isaac, Ruth, Rehab, na Daniel, na-egosi otú Chineke na-metụtara mkpagbu na Assembly. Anyị na-amalite chronologically na akụkọ nke Enoch:
E nok bụ na ọtụtụ ụzọ ochie testamentlig Nga shot of Assembly, nke nwere ike ịbụ izo aka ma ọmụmụ onwe ya, ma n'ihi na oge-ebe maka owuwe nke ọgbakọ.
Enweghị ihu ọnwụ
Hibru 11: 5 - Site okwukwe Enoch a napụrụ na-enweghị ihu ọnwụ. Na ha hụrụ ya ahụghị ya, n'ihi na Chineke weere ya ka ya onwe ya.
E nok e jidere enweghị akatabi okop ọnwụ maka na Chineke weere ya ka ya onwe ya. Ebe bụ Enoch a mma nlereanya n'ọgbakọ, bụ ndị nwere otu nkwa dị ebube.
Na otu ụbọchị a họọrọ ọgbọ, na-ejide elu-nwe-ayi, ma na-eche ọnwụ ihu, na ndị na-na mbụ dara n'ụra, anyị bụ ndị ka dị ndụ ma na-anọgide, na-ejide n'ime Onyenwe anyị họpụtara izute ya na mbara igwe.
D et ndị atọ dị iche iche iche iche nke ndị bi na ụbọchị Noa tupu iju mmiri ahụ bịara. Ọ bụ na-ekweghị ekwe bụ onye jụrụ okwu Jehova, ebe niile n'iyi ke ukwọ. Ọ bụ Noa na ezinụlọ ya na-e chebere site Iju Mmiri ahụ, ọ bụ Enoch bụ onye na-ejide elu si Chineke tupu iju mmiri ahụ bịara.
Onye ọ bụla na ha onwe ha ụzọ na-anọchi anya ndị atọ dị iche iche ige na anyị nwere ike iji tụnyere oge anyị taa. Na nnọọ otu ụzọ anyị na-ahụ ụdị mmadụ atọ n'ụbọchị ahụ mgbe anyị na-akpụ akpụ kwupụta mkpagbu na-agwụcha oge.
The ndị na-eje ije na
M änniskorna ndị nke lara n'iyi na Iju Mmiri nke ụbọchị Noa na-anọchi anya na-ekweghị ekwe, ndị na-weere na Jizọs dị ka Onye Nzọpụta ha. Ndị ga-aga n'ime mkpagbu, na-gụrụ iwe nke Chineke. Ndị na-adịghị echegharị na Mkpagbu ga-ekpe ikpe Jizọs na ga-ahụ ga na-ajụ n'ime ọdọ ọkụ ọkụ.
Noa bụ Israel
N nkwonkwo anọchi anya ihe fọdụrụ nke Israel na Onyenwe anyị ga-mezue ha nkwa na 1000 afọ Reich. Noah si otú a họọrọ nke Israel, nke na a ụfọdụ ụzọ a ga-echebe n'oge mkpagbu. 3.5 afọ n'ime Mkpagbu ga Juu ahụ kwere ekwe na-agbapụkwa n'ime desert ebe Jehova ga-echebe ha n'ihi na àmà na-egosi ya mkpagbu. Noa chebere site na iju mmiri ahụ na a ga-enwekwa a akụkụ nke ndị Juu na ndị na-adị.
Enoch bụ a na foto nke ọgbakọ
E nok bụ a na foto nke ọgbakọ, ndị na-abụghị akụkụ nke Iju Mmiri na ikpe Chineke mgbe ọ na-etinye na-ejide na iwere Chineke tupu iju mmiri ahụ bịara.
Enoch bi a oge mgbe Chineke ekpe ikpe n'ụwa. Mgbe mmehie mgbaru ọsọ e ruru, bịakwara Chineke ikpe mmehie na ụbọchị Noa na o zitere ka iju, ma mgbe e Enoch ama-ejide Jehova. Iju Mmiri bụ a na foto nke iwe nke Chineke ga-eziga n'elu ụwa, na ndị ọjọọ na ndị na ọgwụgwụ mgbe ụfọdụ - iwe na-abịa (1 Ndị Tesalonaịka 1:10). Dị nnọọ ka Enoch, ga-Assembly ga-ezute Kraist na ya tupu ya vredenstid-apụ n'elu ụwa.
2 Pita 2: 6-9 - The obodo Sọdọm na Gọmọra ọ katọrọ mbibi. O tinyere ha ná ntụ ma nye dị ka ihe atụ ihe ga-eme ndị ajọ omume. Ma ọ zọpụtara ezi omume bụ Lọt, bụ onye na-emekpa site ajọ dissolute ndụ. - Onye ezi omume biri ya bụ n'etiti ha, na ụbọchị, na-emekpa ya mkpụrụ obi ezi omume site ọ hụrụ ma nụ ihe ọjọọ ha mere. - Jehova maara otú o si anapụta ndị na-asọpụrụ Chineke nke ọnwụnwa na na-ezighị ezi e jidere ya na ha ahụhụ ruo ụbọchị ikpe. English translation: iji napụta Chineke ọnwụnwa
N bụ Pita dere na-akụzi na chọọchị na n'ime akwụkwọ ozi ya, ọ na-eji ihe atụ nke Lot ka a prototype, na-enye anyị a bara uru ihe atụ nke ụzọ na Jehova na-azọpụta ndị ya site na oge na ebe mgbe ọ na-abịa ikpe Chineke na oge nke ikpe ( si ikpe - eng translation).
Abraham na-echetara Jehova
1 Genesis 18: 23-25 ​​- Abraham we biarue nso, si, "Ị ga-ebibi ndị ezi omume na ndị ajọ omume? Ikekwe e nwere ndị ezi omume iri n'ime obodo. Ị ga na-ebibi ma na-agaghị ebibi ebe ndị ezi omume iri na- e? ya n'ebe dị anya na-eme ihe dị ka, na-ekwe ka onye ezi omume na-anwụ na ndị ajọ omume. ya ga-ahụ na-esonyere ndị dị nnọọ na ndị ajọ omume. enwe ya n'ebe dị anya, ọ gaghị enye ụwa niile ikpe ime ihe ziri ezi ? '
A Braham Jehova chetaara ha esemokwu banyere Sọdọm na Gọmọra, ọ bụ ihe megidere ọdịdị ya na-ebibi ndị ezi omume na ndị ajọ omume.
Site n'inye anyị ihe atụ nke Lot, na-akụzi ihe Pita, na-egosi na Lot abụghị a nwa oge ka ihe atụ, ma a n'ozuzu ụkpụrụ Chineke si n'akụkụ, Jehova mgbe niile "na-azọpụta ndị na-asọpụrụ Chineke nke ọnwụnwa"
Jehova na-ewepụ si Lot obodo
D et dika Jehova zọpụta Lot ikpe ga-aga nke obodo, bụ ịkwaga ya ikpọkidem si na Sọdọm. Jehova nwere ike ọ bụghị nanị na-anaghị ekpe ikpe ndị obodo na-eme ihe ruo ogologo oge na Lot ka dị n'obodo ahụ.
Lot bụ a na foto nke ọgbakọ, nke na-e si oge na ebe tupu mgbe ahụ na ikpé nke Chineke na-aga. Ọ bụ, ndị ọzọ okwu na Jehova agwa bụghị ikpe ndị ezi omume na ndị ajọ omume.
1 Genesis 17: 4 - "Lee, nke a bụ ọgbụgba ndụ m gị: Ị ga-aghọ nna nke ọtụtụ mba.
1 Genesis 17: 6 - m ga-eme ka ị na-emepụtakwa, na-eme ka mba si unu, ndi-eze gēsi n'ebe unu.
Na Saks nwa, bụ a mmezu nke nkwa Chineke kwere Abraham. Chineke kwere Abraham nkwa a nwa na Sarah, na Abraham ga-aghọ mba ukwu, na a nna nke ọtụtụ mba site Isaac.
Chineke na-anwale Abraham obi
N bụ Sara bụ afọ iri itoolu ochie, ịmụ nwa, ọ kwere nkwa na nwa-ya nwoke n'agadi ya, dị nnọọ n'ụzọ na Jehova kwere nkwa Abraham na Sera. Isaac bụ mgbe nanị otu nwa ha, na Jehova ga-emezu ọgbụgba ndụ Ya na nkwa Ya site.
Mgbe oge ụfọdụ gasịrị na-agbalị ka Jehova nke Abraham obi, ma na-arịọ ya ka ọ gaa ije nke ubọchi atọ pụọ, ka àjà. Àjà nsure ọkụ n'elu ebe ịchụàjà ga-Aịzik, bụ nanị na hụrụ n'anya nwa.
Isaac, a foto Kraịst
N Abraham bụ na-erubere Jehova, otú a dum mere a onyinyo nke ihe Chineke mere n'obe ka afọ 2,000 mgbe e mesịrị, na e nwere ọtụtụ akụkọ ihe mere eme na-egosi na Isaac bụ a doro anya na foto nke Jesus Christ:
Jehova na-akpọ Isaac, Abraham "naanị nwa", ọ bụ ezie na Abraham ama nwere ụmụ nwoke abụọ mgbe ahụ. N'otu ụzọ ahụ, Jizọs bụ Chineke na nwa. (1 Genesis 22: 2)
Isaac ga-achụ n'àjà n'ebe Jizọs àjà na Calvary elu. (1 mos 22:14)
The njem ebe àjà were ụbọchị atọ, dị nnọọ ka Jizọs nọ n'ili ruo ụbọchị atọ, ehihie na abalị. (1 Genesis 22: 4)
Isaac mmanya onwe ya nkú nke àjà nsure ọkụ ahụ ruo ebe ahụ, dị nnọọ ka Jizọs na-ebu ya cross ikpeazụ ụzọ ịgafe. (1 Genesis 22: 6)
Abraham na Aisak ije ọnụ na-egwu, na otú ahụ na Nna ahụ na Ọkpara ya na agreement. (1 Genesis 22: 8)
Isaac bụ otú a doo anya Jizọs, na ndị na-arụ ọrụ mere na obe nke Calvary. Abraham tụkwasịrị nnọọ obi n'ime Onyenwe anyị nke ọnọdụ, na kweere na Chineke na Aịzik ga-amaliteghachi ọzọ mgbe aja.
The orù Eliezer - a picture nke Mmụọ Nsọ
1 Genesis 15: 2-3 - Ma Abram kwuru; "Onyenwe anyị, Onyenwe anyị, ihe unu ga-enye m? Ịhụ na m pụọ n'amụtaghị nwa, na onye-nketa nke ụlọ m bụ Elịiza nke Damascus. "Abram wee sị; "Lee, m na-na-emepụta ihe ọ bụla ụmụ. Otu nke m na ezinụlọ m ga-eketa m. "
S unifier mgbe Isaac chọta a na-alụ ọhụrụ, Abraham na-eziga ọkpara ohu na ya ilekọta, Eliezer chọta a na-alụ ọhụrụ maka Isaac, n'etiti ezinụlọ ya. Ọ dịghị ebe ke ofụri akụkọ Isi nke 22, anyị na-ahụ aha orù. Ma na 1 Ọpụpụ isi 15: 2 anyị na-amụta na Abraham okenye orù aha ya bụ Elieza, na ná mmalite onye nketa ka Abraham na ulo.
Na Jọn 15: 26-27, anyị na-amụta ọtụtụ ihe banyere Mmụọ Nsọ. Ọ bụghị akụkụ nke Nna, na-agba akaebe nke Christ. Ọ bụkwa onye inyeaka anyị na Mmụọ nke eziokwu.
The orù Eliezer bụ a na foto nke Mmụọ Nsọ. Ọ e-zitere Abraham. Ọ bụ amaghị na emeghị okwu banyere onwe ya, ma àmà maka Rebecca, na-eme n'ọdịnihu nwunye Aịzik. N'otu aka ahụ na-ekwu okwu, Mọ Nsọ bụghị banyere onwe ya, ma na-atụ na-agba akaebe na banyere Jizọs ndị chọọchị. Eliezer izute Rebecca na olulu mmiri, nke nwere ike ịbụ a na foto nke Mmụọ Nsọ ẹyenọ ná ndụ anyị. The aha Eliezer pụtara otu ihe ahụ dị ka Mmụọ Nsọ "nkasi obi".
Rebecca - nwunye ọhụrụ nke Kraịst
P otú ahụ Isaac bụ a foto Kraịst, na orù Eliezer bụ a na foto nke Mmụọ Nsọ, Rebecca bụ ụdị nke Church, h nke Kraist.
Rebecca na-abịa site n'otu obodo dị ka Abraham, bụ onye dina Babylonia. Babylon bụ a na foto nke a na ụwa, onye bụkwa chọọchị uche na e n'èzí. Rebecca bụkwa onye ikwu nke Abraham, na ọ bụ otu dị ka ndị Kraịst nile, n'ụzọ ime mmụọ, mkpụrụ nke Abraham. (Rome 4:16)
Rebecca na-enweta onyinye nke Eliezer mgbe ọ hụrụ ya, nke Mmụọ Nsọ ke otu ụzọ, ndị Assembly graces dị ka uche nke ha. Mgbe Rebecca gwa ohu, ọ na-agba ọsọ n'ụlọ na-agwa anyị ihe niile na ọ hụwo na ahụmahụ. Assembly ozi bụ pụọ na-ekwu okwu banyere "ozi ọma" na-agba akaebe na ihe niile Jehova mere ná ndụ anyị.
Napụtara n'aka n'abalị
T jänaren Eliezer abịarute na mgbede na-ọma n'obodo ebe Rebecca ndụ. N'abalị na-anọchi aghara, na ogbaaghara na mgbagwoju anya, ebe n'abalị na-abịa, nke bụ a na foto nke Mkpagbu na Day nke Jehova.
Anyị na-ahụ na ọ na otú ahụ na 1 Genesis 24:63, ebe Isaac osobo ọdịnihu ya na-alụ ọhụrụ na mgbede. Ọ ga-enweta ya, ma ọ na-ewetara ya n'ime nne-ya tent, ebe Rebecca na-aghọ Isaac nwunye.
A dị ọcha na-amaghị nwoke ka Christ
V ịmụta na Rebecca bụ a nwa agbọghọ, bụ onye ọ dịghị onye-abịa nso (1 puree 22:16). N'otu aka ahụ, ọgbakọ dị ka a dị ọcha na-amaghị nwoke na Kraịst, na betrothed otu onye.
Ná ngwụsị nke akụkọ, onye puree 24: 62-67, anyị na-ahụ na Isaac (alụ nwanyị ọhụrụ) laghachi mgbede, tupu n'abalị (Mkpagbu), na Elieza (Mmụọ Nsọ) bụ ihe na-ewetara (owuwe) Rebecca (nwunye) izute Isaac ihu na ihu maka oge mbụ. N'otu aka ahụ, na Mmụọ Nsọ, na-efopụ n'ọgbakọ, na mgbede, tupu ya abalị na mkpagbu ahụ amalite, na anyị ga-esi na-ahụ na izute Onyenwe anyị nwoke na-alụ maka oge mbụ.
Joshua 1: 2 - "My Mozis ohu bụ ihe nwụrụ anwụ. Ugbu a, bilie, gafee Jọdan a, gị na ndị a niile, banye n'ala ahụ m na-enye ụmụ Izrel.
H istorien nke Rahab atọrọ banyere afọ 500 mgbe Aịzik na Rebecca na Jenesis isi nke 1 24. Kemgbe ụwa, a ọtụtụ mere Israel mgbe oge a.
Israel enwetela a oge nke n'ịbụ ohu n'Ijipt, na mgbe ahụ na otú Jehova n'ụzọ ọrụ ebube tọhapụrụ na-azọpụta ndị nke n'agbụ site Moses. Mgbe ndị Juu na ndị wagharịrị n'ọzara ruo afọ 40, gaa Jehova elu Joshua, bụ onye ga-edu ndị na-emeri onye iro na-kwere ná nkwa n'ala nkwa ahụ Chineke kwere ná nkwa.
Nledo abụọ na Jericho
Jos 2: 9 - "Amaara m na Jehova enyewo unu ala a ma na ụjọ unu adawo anyị, na na ndị nile bi na-atụ egwu gị.
Na efore na Israel enyene Jericho, ndị nledo abụọ ahụ zitere na iledo ala ahụ na obodo Jeriko. Ndị nledo na-chọpụtara na agbaba na nwaanyị akwụna bụ Rehab, bụ ndị na odịbe ndị nledo abụọ ahụ maka obodo folks onye na-achọ ndị mmadụ.
Rahab azọrọ okwukwe ya na ya nkwenye maka Scout, bú Chineke nke Israel nyere ha ala. Ọ jụrụ ihe mere Scout na-enye ya a nkwa nke nchebe, ma ya na ndị ezinụlọ ya na ụbọchị Israel enyene obodo.
Napụtara n'aka ikpe
E TT red eriri na window, ga-abụ ihe ịrịba ama na ọ bụ ebe Rehab na ndị ezinụlọ zukọrọ. Mgbe Israel agha hụrụ eriri, ebudatara ma zọpụta ha Rehab na ndị ezinụlọ si mbibi dị nnọọ ka ndị nledo ahụ kwere ná nkwa.
A na foto nke ọgbakọ
S Kokan Rahab bụ a na foto nke ọgbakọ. Ọ bụ a na-ekpere arụsị, bụ akwụna na onye mmehie ekwupụta okwukwe ya na Chineke nke Israel. Ọ na-eche banyere, mgbe mmetụta maka ndị Juu, nke bụ ihe mere ya nzọpụta.
Jericho bụ a na foto nke a na ụwa, nke a na-echekwa ha. Rahab (Assembly) a na-ewepụ si na Jeriko (World), tupu mgbe ahụ, na obodo ebibi ma na ọkụ (Mkpagbu)
R UTS akwụkwọ a na-akpọ "mgbapụta Ịhụnanya Akụkọ," na bụ banyere Naomi, a onye Juu nwaanyị si Bethlehem onye ida n'ala ha n'ihi oké ụnwụ na Israel, na mgbe ahụ na-amanye-agba ọsọ ka Moab (Jordan).
Obere oge, na di ya anwụọ ma doo ya naanị na ndị ogbenye na mba ọzọ. Mgbe ụnwụ n'aka Naomi laghachi Bethlehem nwa ya nwaanyị na Ruth, bụ onye ṅụrụ iyi na agaghị ahapụ ya. Ruth bụ a nwanyị Moab nke lụrụ otu n'ime Ruth ụmụ ndị ikom na-gburu. Mgbe ma na-azụ na Betlehem, n'ihi ya, na-aghọ onye a ma ama onye Juu mmadụ, Boaz, na ịhụnanya na-Ruth wee lụọ nwunye ya.
Site na iwu nke mgbapụta na alụmdi na nwunye, anyị na-enwe ma Neomi na Rut mgbapụta, na Naomi-azụ ala-ha, ọ na-efu.
H istorien Rut bụ ihe ịtụnanya akụkọ ọmụmụ, nzọpụta na mgbapụta, ma na-enye ihe atụ picture nke ọgbakọ ma na mkpagbu.
Naomi bụ a na foto nke Israel, na Rut a foto nke mba nile Assembly onye bụ di na nwunye na förlösaren, ndị Juu nwoke Boaz, onye bụ a na foto nke Messiah. Naomi ama efehe obodo ha n'ihi ụnwụ, dị nnọọ ka Israel a chụpụrụ ya mba 2000 afọ gara aga. The parish nwere akụkụ nke Messiah site Juu kwere ekwe, mgbe ekwesi na otụk akụkụ nke Israel (Ndị Rom 11:25).
Na ụzọ iji gbapụta Israel (Naomi), ya mere, na-Messiah a na-ekpere arụsị agbamakwụkwọ (Ruth). Boaz redeems ma na-azọpụta ma Rut na Naomi na ọnọdụ ha nọ, na akọwaputa akpatre Israel (Naomi) n'ụzọ zuru ezu.
Napụtara si mkpagbu
S amtidigt otú bụ akụkọ nke Ruth, a na foto nke ụka na Jehova na-azọpụta agbanahụ mkpagbu.
Anyị chọta atọ ọnọdụ isi atọ na-agba àmà nke a. Akpa, Ruth na-aga ala na tröskeplatsen dị ka nne ya jụrụ ya. Nke abụọ, Boaz teta na hụrụ Ruth na abalị oge mgbe ọ gbabara na ya. Thirdly, Ruth nwetara ikike zoo n'okpuru uwe mgbokwasị Boas , onye na-agbasa ya uwe mwụda ya, na Boaz ghọrọ ya mgbapụta a n'abalị.
Tröskeplatsen - A na foto nke mkpagbu
T röskeplatsen bụ a picture ikpe na mkpagbu anyị na-enwe n'ọtụtụ ebe na ma OT na NT (Amos 1: 3, Isaiah 21:10, 41: 14-16, Mkpughe 14: 19-20).
The abalị na ụtụtụ bụkwa a picture nke ma ndị Mkpagbu, Ikpe na mweghachi. Jizọs kwuru nke abalị-abịa ebe ọ dịghị mmadụ pụrụ arụ ọrụ (John 11: 9), na Paul dọrọ aka ná ntị na ụbọchị Onyenwe anyị, nke bụ a oge nke ikpe ga-abịa dị ka onye ohi n'abalị (1 Ndị Tesalonaịka 5: 2).
N'oge Boas-echebe mantle
Rut 3: 9 - "Ònye ka ị bụ?" Ọ jụrụ. Ọ zaghachiri, sị: 'Abụ m Rut, ohu gị nwaanyị. N'ịgbasa gị manteflik karịrị gị nwaanyị, n'ihi na ị bụ m onye mgbapụta.
R si na-ezo ezo n'okpuru uwe mgbokwasị Boas n'akụkụ ụkwụ ya ruo abalị bụ n'elu na ọ bụ ụtụtụ ọzọ.
N'otu ụzọ ahụ, Jehova ga-echebe ma zoo ya n'ọgbakọ n'oge iwe, na-esote n'abalị, ruo mgbe ọchịchịrị agamevu na ụtụtụ dawns. Assembly ebe n'oge Mkpagbu, ga-n'okpuru Onyenwe mantle, Jeruselem nke eluigwe, na n'okpuru patronage nke eluigwe ime-ulo.
Bịa ndị m, na-aga n'ime gi ulo nile
Isaiah 26: 17-21 - Dị ka nwanyị dị ime squirm mgbe ọ bụ banyere onye ga-amụ, na-eti mkpu, ha mgbu, n'ihi ya, ọ bụ na anyị gi, O nwe-ayi. Anyị tụrụ ime writhed: ma anyị mụrụ ifufe. Anyị akwụ nzọpụta ruo ala, na ọ dịghị onye a mụrụ n'ụwa. Ma gị nwụrụ anwụ ga-adị ndụ; ha ga-ebili. Kulie na-abụ abụ, unu na-ebi n'ime ájá, n'ihi na igirigi gị bụ a igirigi nke ìhè, na ụwa ga-esi ndị nwụrụ anwụ. Bịa ndị m, na-aga n'ime gi ulo nile, emechi ụzọ n'azụ gị. Zobe onwe gị a nwa oge ruo mgbe iwe na-agafe. N'ihi na, le, Jehova na-abịa n'ime ya ebe-ata ndị bi n'ụwa n'ihi ajọ omume-ha. Ụwa ga-kpugheere ọbara ha ụgwọ na-adịkwaghị zoo ha egbu.
D et isiakwụkwọ a nke Aịsaịa mejupụtara ịtụnanya amaokwu na-agba àmà ka Jehova onye ga-eziga kpọọ ndị ya, bụ nke ọ ga-ezo ma chebe ha-ulo na njikọ na iwe nke oge setịpụrụ na ụwa.
Anyị apụghị ịhụ na ihe odide a si Isaiah mgbe ọ bụla e mezuru. Ọ na-ekweta na mbilite n'ọnwụ ahụ Jizọs kwusara, na Daniel na-agwa Dan 12: 2, nke anyị maara ga-eme mgbe Mkpagbu na bụghị tupu. Ebe a Aịsaịa na-ekwu kama a mbilite n'ọnwụ mbụ na-adị mgbe Chineke na-akpọ ndị ya na ha ulo nile, na n'iru na n'iru iwe nke Chineke na ikpé-apụ n'elu ụwa.
Dị ka a nwanyị na nwa
Mkpughe 12: 1-6 - A oké ihe ịrịba ama pụtara ke heaven: a nwaanyị uwe anyanwụ, na ọnwa n'okpuru ya n'ụkwụ na okpueze nke kpakpando iri na abụọ n'isi ya. Ọ bụ ime ma tie mkpu na na ịkpasu ka a napụta.
P na otú ahụ ka Isaiah, Jọn hụrụ otu nwaanyị na njikọ na njedebe oge dị ime ma ime nēme. The ụka na-emeghi-dị ka a nwaanyị na-amụ na Bible, ma ọ na-eme N'aka nke ọzọ, Israel. The nwaanyị a picture nke ma Mesaya Juu n'oge Jizọs, na Mesaya Juu n'oge mkpagbu.
Israel nwere atọ ịmụ nwa ọ nwere na-aga site tupu ọ na-aga n'ime 1000 afọ alaeze. All atọ nke ndị a ịmụ nwa na-kọwara n'Aịsaịa isi 66:
Aịsaịa 66: 7-8 - Tupu Zion mara onye ime, ọ na-enye nwa nwa (Jesus). Tupu ụfụ abịakwasị ya, ọ amụwo a nwa nwoke. Ònye nụtụrụla ụdị ihe a? Ònye hụrụ ihe ọ bụla dị ka ya? Ike a ala-adị ndụ na otu ụbọchị (1948), ma ọ bụ a-amụ mba n'otu mgbe (nzọpụta nke Israel), n'ihi na Zaion mụọ ụmụ ha na-ama mgbe mgbu malite?
Ya mere, na njikọ na ime na Israel ga-enweta, na n'iru iwe nke oge, Jehova ga-ekwe ka ndị nwụrụ anwụ na-akpọlite, ọ ga-akpọ ndị ya onwe ya, na-ezo ezo na-ulo-ya.
John na-anọchite anya nke a na chọọchị na ga-ahụ ndị na uppryckandets ụbọchị. Site a iwu, a olu onyeisi ndị mmụọ ozi na trump nke Chineke, ọgbakọ ga-ejide elu n'ime eluigwe ma ga-ahụ mkpagbu n'af n'ụwa.
H istorien banyere Daniel na ndị ikom atọ na n'oké ọkụ, bụ otu n'ime akụkọ nke Old Testament na-egosi a doro anya na foto nke mkpagbu na n'ọdịnihu ẹkụre.
Daniel na-steeped na eschatology, nrọ, n'ọhụụ na ihe a na njedebe nke oge na-eme. N'adịghị ka n'Akwụkwọ Mkpughe, nke bụ a nkọwa zuru ezu banyere mkpagbu, sitere na Daniel n'elu a ogologo oge mmiri, ma backward na zipu na oge.
Daniel - a na foto nke ọgbakọ
H istorien banyere Daniel na ndị enyi ya atọ, na-ewe ebe na mmalite nke ndọrọ n'agha gaa Babilọn, ebe niile anọ na-eje ozi mgbe ndị Babilọn eze.
Dị nnọọ ka Joseph, Daniel na-elu na a na ọnọdụ na naanị eze guzo n'elu ya. Na Mkpughe, chọọchị na-emekwa ka ndị na-eje ozi dị ka ndị nchụàjà na ndị eze n'ụwa a. Ihe ga-agwụ agwụ na Millennium. N'ụzọ dị otú a bụ Daniel a na foto nke ọgbakọ.
Prototype nke àmà na-egosi
K Young Nebuchadnezzar, nke bụ a doro anya atụ nke àmà na-egosi, tinyere elu a oyiyi ọlaedo na ndagwurugwu Dura ke Babylon. Ọ Rịba ama, na ihe oyiyi bụ iri isii n'ịdị elu na kubit isii n'obosara, nke nwere ike iji ya tụnyere àmà na-egosi okwu bụ 666th
Nebuchadnezzar ese onye ọ bụla daa ma na-efe a akpụrụ akpụ set, ebe ya pụta maka ndị na-ekweghị ndị a tụbara ahụ n'oké ọkụ. Na-ere ọkụ ọkụ bụ ihe osise nke iwe Chineke na oké ahụhụ na mkpagbu.
Ẹsịn n'oké ọkụ.
Malakaị 4: 1 - Le, ụbọchị na-abịa, ọ na-agbakwa ka a ọkụ.
S adrak, Mishak, na Abednego jụrụ ịkpọ isiala ka Nebukadneza akpụrụ akpụ na, ha na-atụba n'oké ọkụ.
Eze nyere n'iwu na ọkụ ga-ewe iwe dị ọkụ ugboro asaa hotter karịa gị na mgbe hụrụ ya na-adị, na e nwere a na foto nke izu okè okwu. Jehova zitere mmụọ ozi ya onye na-echebe Shedrak, Mishak na Abednego na-acha ọkụ ọkụ ọkụ, ha wee pụta na-enweghị ihe ọ bụla mebiri ma ọ bụ mmetụta nke ọkụ.
Ebe bụ Daniel
M otu ọ usuu ajụjụ nke akụkọ a bụ ebe Daniel bụ ebe. Ndi enye otu n'ime ndị na-kpọ isi ikpere ka oyiyi? Gịnị mere e ji na ọ gaghị gara, na ihe mere e ji na ọ gaghị ẹsịn n'oké ọkụ?
Anyị nwere ike ịdị pụtara ụfọdụ na Daniel na-adịghị kpọọrọ ikpere ka Nebukadneza akpụrụ akpụ na. Daniel e dị abụghị ebe onye ọ bụla ga-efe ihe oyiyi, ma ọ bụ na-ere ọkụ ọkụ nke na-ata ahụhụ. Chineke nwere "e ya pụọ."
B eskrivningen dị ka eze nwere ndị ikom ndị a na n'oké ọkụ bụ na e nwere ndị Juu atọ ndị ikom (Dan 3:12). The Juu atọ ndị ikom bụ, ndị ọzọ okwu, a na foto nke hoputara Israel, na Daniel bụ a na foto nke ọgbakọ.
Daniel (Assembly), onye m hụrụ n'anya (Daniel 10:11), ẹnịm si oge na ebe mgbe ọ na-abịa n'oké ọkụ (mkpagbu), mgbe ndị enyi ya atọ (Israel fọduru), ẹnịm n'etiti na site trängslen.
G eNom ndị a akụkọ nke Enoch, Lot, Rebecca na Isaac, Ruth, Rehab, na Daniel, anyị nwere ike ịhụ a ụkpụrụ na a red eri.
Anyị na-ahụ ihe atụ ahụ ihe na-egosipụta na-ezo aka ilekọta, Assembly oge anyị bi na ya. N'ebe ahụ, anyị pụrụ ịhụ na Chineke na-adịghị ikwu na otú ahụ na Church, nke ọ na-eme na Israel. Ma iche iche nzọpụta Jehova nwere a pụrụ iche atụmatụ, nke ọ ga-mezue. Jehova ga-echebe Israel gara maka àmà na-egosi na mkpagbu, nke ọ ga-mezue ha ọgbụgba ndụ na nkwa site.
Chineke na-ezube maka na chọọchị ha
P na n'otu ụzọ ahụ, Jehova nwekwara mezue ya na atụmatụ ya ahu na-alụ ọhụrụ, na chọọchị nke Chineke. Mkpagbu a na-adịghị pụtara n'ihi na Jehova na-alụ ọhụrụ, ya mere, ya mere Jizọs ga-weghachite na-ewepụ ndị na-alụ ọhụrụ tupu mgbe ahụ na ikpe Chineke ga-esi n'elu ụwa.
The ụka na-echekwa si oge na ebe mgbe ọ na-abịa mkpagbu na ikpe ikpeazụ. Gọziri agọzi olileanya, Chineke anyị na Onyenwe anyị Jizọs Kraịst, onye ga-azọpụta anyị ikpe.
Biko gaa na Miakel Walfridssons blọọgụ: